You & Your Church – World Wide Christian Ministries
You & Your Church
Posted on 12th September 2020 12th September 2020 by Albert Martin
ခရစ်ယာန်အသက်တာ လျှောက်လှမ်းခြင်းနှင့်လမ်းခရီးသည် ခက်ခဲမှုနှင့်ပြဿနာပေါင်းများစွာနှင့်၊ ပြည့်နှက် နေပြီး၊ ရိုးရိုးလေးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သိရသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်သည် ဤအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဖယ်ရှားမပေးထားကြောင်းဖြစ်ပေ၏။ အမှန်တကယ်ပြောရရင်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာသည် ရံဖန် ရံခါမှန်ကန်တတ်၏၊ ၎င်းအကြောင်းကြောင့်၊ သမ္မာကျမ်းစာက ခရစ်ယာန်လမ်းခရီးစဉ်သည် “ကျဉ်းသော လမ်းဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ အံ့ဩဖွယ်ကတိတော်မြတ်ရှိကြောင်း၊” သရုပ်ဖော်ပြသပေးထားပါ သည်။ ထိုလမ်းခရီးသည် ထာဝရအသက်သို့ ပို့ဆောင်ပေး၏။
သို့သော်ငြားလည်း၊ လမ်းမအပေါ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားကြသကဲ့သို့၊ အသက်တာကို ပိုမိုလွယ်လွယ်အောင်(သို့) ပိုမိုခက်ခဲအောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံသင့်သည်ထက် ပိုပြီး အန္တရာယ်များနှင့် ကြိုလင့်နေသော ဘေးရန်များနှင့်ပြည့်နှက်ကောင်း ပြည့်နှက်နေနိုင်ပေ၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား၊ ဘုရားသခင်ပေးထားသောအမည်အားဖြင့်၊ ဖော်ပြရင် သမ္မာကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ ရှင်းလင်း တိကျသောနည်းဟန် “လမ်းပြမြေပုံ”ကို မရွေးချယ်လို့(သို့) မလိုက်နာလို့ဖြစ်ပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၏ စိတ်အားထက်သန်ခြင်း၌၊ ကယ်တင်ရှင်အား၊ ချစ်မြတ်နိုးခြင်း စိတ်သဘောထား တစ်ခုတွင်၊ သတိမထားမိဘဲ၊ လမ်းမှားသွားမိခြင်းနှင့် လမ်းမှန်ပျောက်ဆုံးခြင်းကိုသော်၎င်း၊ စိတ်အားထက်သန် မှုကို အသုံးပြု၍၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဆန့်ကျင်လျက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်၏ ရန်သူကြီးအားဖြင့် လမ်းမှားသို့ တမင်တကာဦးဆောင်ခြင်းမျိုးကိုလည်း ခံရတတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် လွယ်ကူစွာ၊ ရှာတွေ့တတ်ကြပါ၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သမ္မာကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အား၊ ပြောပြထားသည်အရာကို သတိရဖို့ကောင်း ပေ၏။ သုတ္တံ ၁၄:၁၂ တွင် “လူထင်သည်အတိုင်း မှန်သောလက္ခဏာရှိသော်လည်း၊ အဆုံး၌သေခြင်းသို့ပို့တတ် သော လမ်းတစ်မျိုးရှိ၏၊” ထိုနောက် ဘုရားသခင်၏ လူစုများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ရှာတွေ့ရမည်၊ နောက်ဆုံးသောအရာမှာ၊ ဝိညာဉ်ရေးရာနွမ်းပါးမှုနှင့် ခြောက်ကပ်သော တွေ့ကြုံခံစားမှုများသာ၊ ဖြစ်တော့ သည်၊ အကြောင်းမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏လမ်းခရီးကို၊ လျှောက်လှမ်းဖို့ ကျရှုံးကြသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်၊ ဤအရာများဖြစ်ပျက်နေခြင်းမှ၊ ကာကွယ်ဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာပြုလုပ် သင့်ပါသနည်း၊ ဟုတ်ပါပြီ၊ ဤဖြစ်ရပ်နှစ်မျိုး ဖြစ်ပျက်နေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသော အခြေခံအရေးကြီးသည့်အ ရာမှာ “လမ်းပြမြေပုံ” ကို ရှင်းလင်းစွာ လိုက်လျှောက်ရေးနှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မြေပုံကိုဘယ်လိုမှန်ကန်စွာ၊ ဖတ်ရှု၍ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ကာ၊ နားလည်ရမည်အကြောင်း သင်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအချက်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲက တမန်တော်များကိုယ်တိုင် ပေးထားကြသည့်အမှုတော်မြတ်၏ သီးသန့်တိ ကျသော ကဏ္ဍဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၊ ယင်းကျမ်းပိုဒ်များအပေါ် လိုက်လျှောက်ရမည့် သီးသန့်ကဏ္ဍဖြစ် ကာ၊ ဒေသန္တရအသင်းတော်၏ သီးသန့်ရှေ့နောက် ဆက်စပ်သောအကြောင်းများ၌၊ ၎င်းကဏ္ဍအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပုံနှင့် စီမံပုံအတွက်ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများအနေဖြင့်၊ စတြဝဠာလုံးဆိုင်ရာအသင်း တော်နှင့်၊ ဒေသန္တရအသင်းတော်၏ အသင်းဝင်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန် ဝတ္တရားများဖြစ်သည်။
အသင်းတော်နှင့်ပတ်သက်၍၊ မှားယွင်းသောထင်မြင်ယူဆချက် များစွာရှိ၏။ ဤအရာများအား အကဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်ရေးသည် ဤလေ့လာမှု၌၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက် မဟုတ်သော်ငြားလည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတူတကွ လေ့လာကြသည်အတိုင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် “ကျွန်ုပ်တို့၏ နားလည် နိုင်ခြင်းမျက်စိများကို ဖွင့်ပေးလိမ့်မည်၊”(ဧဖက်၊ ၁:၁၈) ဟူ၍၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့စွဲကိုင်ထားသော ယုံမှတ်ခြင်းများ၊ ထုံးတမ်းဓလေ့များနှင့် ယုံမှားသောထင်မြင်ချက်များတို့မှ ဖယ်ရှားကာ၊ လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ် ယုံကြည်ပါ၏။
ဤကဲ့သို့ − ကောင်းသောဈာပနနှင့် သင့်တော်သောဈာပန၏ ပထမဆုံးတောင်းဆိုချက်များမှာ ဆန္ဒရှိနေသော လူသေအလောင်းတစ်ခုဖြစ်၏၊” ဟူသော ရှေးဟောင်းဆိုရိုးစကားရှိခဲ့ပါသည်။ မကြာသေးခင်နှစ်များ၌၊ မျက် မှောက်ခေတ် အဖြစ်အပျက်စီစစ်ချက်ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား အသင်းတော်သည် သေခါနီးဖြစ်၍၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး ၌၊ ပြဋ္ဌါန်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်း၏ “အသုဘခေါင်းလောင်းထိုးသံ” မြည်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သတိပေးလေ၏၊ ထို့အပြင်၊ ကနေဒါလူမျိုး ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကလည်း၊ အခြားသောလီဘရာလ် သီဩလော်ဂျီပညာရှင်များ (liberal theologians) နှင့်အတူ အသင်းတော်သည် နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအထိတောင် တည်ရှိတော့ မည်မဟုတ်ဟု၊ ပြောဆိုထားကြ၏။ သို့သော်ငြားလည်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သက်သေအထောက်အထားများကမူ၊ ၎င်းသည် “ဆန္ဒရှိနေသောလူသေအလောင်း” မဟုတ်ကြောင်းပြသထားကြ၏။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ၊ အသင်းသူ/သား သန်း၁၂၆ ကျော်နှင့် ကမ္ဘာအစိတ်အပိုင်းအားလုံးမှ Evangelical နှင့် Non-Conformist အသင်းတော်များသည် မြန်ဆန်စွာ ခုန်တက်လာကြပြီး၊ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဝတ် ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအား တရားမဝင်ဟု ကြေငြာသောနေရာဒေသများတွင်ပင်လျှင် “ဝါးကပ်ကုလားကာ” နောက် ကွယ်နှင့် မကြာသေးမီက “သံကုလားကာ” ခေတ်ထိတိုင်၊ အသင်းတော်သည် ခုန်လွှားလျက် ခုန်ပေါက်လျက် ပင်၊ ကြီးထွားနေပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်သည် သန်မာပြီး၊ ကျန်းမာခြင်းကိုသော်၎င်း၊ ပိုမိုပြီး၊ ကြီးထွား လာခြင်းတို့ကိုသော်၎င်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ရှုမြင်ပုံများစွာရှိတာဟာ အမှန်တရားတစ်ခုပင်ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍၊ မိမိ တို့သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုသောသူဟူသမျှအတွက်တော့၊ ဤအချက်သည် အံ့အားသင့်စရာကြီးကြီးမားမားမရှိ နိုင်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ယေရှုခရစ်တော်၏နှုတ်ထွက်စကားများမှာ၊ “ဤကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်း တော်ကို ငါတည်ဆောက်မည်၊ ထိုအသင်းကို မရဏာနိုင်ငံ၏တံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ၊”(မဿဲ၊ ၁၆:၁၈) ဟူ၍ဖြစ် ၏။ ဘုရားသခင်၏ လူစုများအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်းတော်ကို ကာကွယ်နေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး၊ ယေရှုခ ရစ်တော်နှင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့သည် မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာ (အသင်းတော်) ကို ကာကွယ်ဖို့ တတ်စွမ်းကြပါ၏၊ ဒါပေမဲ့လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအသင်းတော်အတွင်း၊ မိမိတို့နေရာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် တာဝန်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့တော့ လိုအပ်ပေသည်။ ထို့နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်လူစုများ၏ ဒေသန္တရလူ့ဘောင်အသိုင်းအဝိုင်းဘောင်များအတွင်း၊ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမည်အကြောင်းနှင့် အချင်းချင်း ဘယ်လိုဆက်နွယ်/ဆက်ဆံရမည်အကြောင်း သင်ယူလေ့လာဖို့၊ လိုအပ်ပေ၏။
ခရစ်ယာန်များသည် ကိုယ်တော်အတွက် အသက်ရှင်၍ ကိုယ်တော့်အဖို့ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်မှုမျိုးဖြင့်၊ လုပ် ဆောင်ပေးရေးသည် ဘယ်တော့မှ ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်သလို၊ ဘယ်တော့မှလဲ ဖြစ်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အား သမ္မာကျမ်းစာက ရှင်းလင်းစွာပြောပြထားသည်မှာ “ဘုရားသခင်သည် ပေါက်ဘော် မရှိသောသူတို့အား၊ အိမ်ထောင်ချခြင်းအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၍” ဆာလံ၆၈:၆။ ဟူ၍ဖြစ်ပြီး၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဘုရားသ ခင့်လူစုများ၏ သီးသန့်မိသားစုများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်သန်ကြသည်ဖြစ်၍၊ သခင်ယေရှုအဖို့၊ စီမံလျက် ဆောင်ရွက်နေကြရ၏။ ငါတို့သည် “ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်” ဖြစ်ကြသည်မှာ မှန်ပေ၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍၊ ထိုစကား လုံးများအား၊ ငါတို့သည် သင်ယူကြဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရာကို နားမလည်သော် ခရစ်ယာန် အသက်တာထဲ၌၊ ရင့်ကျက်မှုဆီသို့ ရွေ့သွားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းအစပိုင်း အခန်းကြီးများကို တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့ အချိန်ယူ သောအခါ၊ တမန်တော်ရှင်ယောဟန်သည် သူရရှိသည့် ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်နှင့် သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကို ဗျာဒိတ်တော်မြင်ရခြင်းကြောင့်၊ အံ့အားသင့်ခြင်း ရှိလေ၏။ ထို့နောက်၊ ယေရှု သည် အညင်သာဆုံးစကားတော်ဖြင့် သူရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုအလယ်တွင် “မကြောက်နှင့် (ဗျာဒိတ် ၁:၁၉)” ဟု ပြော ဆိုလေ၏။ သခင်ယေရှုသည် ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ဦးဆောင်၍ အသင်းတော်ခုနစ်ပါး တစ်ခုချင်းစီနှင့် ပတ်သက် သည့် ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ပြောဆိုကာ၊ ၎င်းတို့၏ပြဿနာများ၊ နာကြည်းမှုများ၊ ၎င်းတို့၏ထူးခြားချက်နှင့် အသီးသီးသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်းများ ပြောပြခြင်းများဆိုင်ရာ အနာဂတ်ကို ယောဟန် အား ရူပါရုံဖွင့်ပြခြင်းတွင် ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ၊ ပြောထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်မယုံပါ။
သခင်ဘုရားသည် မိမိ၏စကြဝဠာဆိုင်ရာအသင်းတော်ကိုသာ စိတ်ဝင်စား၍ “ဒေသန္တရအသင်းတော်” သည် ကိုယ်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲ၌၊ “အထူးမြတ်နိုးခြင်း”နေရာမရှိ ဟူသော ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ရှိ အချို့တို့၏ထင် မှတ်ယူလေ့ရှိသော အလေ့အထသည် လုံးဝမှားယွင်းပါ၏။
ဤဗျာဒိတ်တော်ထဲတွင်၊ ယောဟန်အား ယေရှုခရစ်တော်က မီးခွက်တစ်ခုစီကို ပေးထားရာတွင်၊ ရင်းနှီးစွာသိ နားလည်ခြင်းရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်၊ သူသည် စိတ်မဝင်စားခြင်းနှင့် တည်မြဲခြင်းအပြစ် မှတ် သားရန်၊ မြင်တွေ့ခြင်းရှိ၏၊ ကိုယ်တော်သည် အချို့ကို သတိပေး၍၊ အချို့ကိုမူ နှစ်သိမ့်၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍၊ ဘုရားသ ခင်၏ လူအုပ်စုတစ်စုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်တာထဲ၊ ကြီးထွားမှုထဲနှင့် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရင့်ကျက်မှုအတွက်၊ ဘုရားသခင်သည် ဒေသန္တရအသင်းတော်အပေါ်၊ များပြားလှသော အရေးကြီးမှုများ ချထား ပေးကြောင်းကို ဘယ်တော့မှ၊ မမေ့လျော့ရပါ။ ဒေသန္တရအသင်းတော်အား၊ ယုံကြည်သူ၏ တွေးထင်ချက်ထဲ၌၊ ရိုသေခြင်းရှိ၍ ချစ်မြတ်နိုးမှုရှိဖို့ ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် မိမိအသင်းတော်၏ အရှင်သခင်အဖြစ် ဘုရားသခင်၏ စုဝေးကြသည့်လူအသီးသီး၏ အသက်တာ ကျန်းမာရေးနှင့် သွင်ပြင်အခြေအနေများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းရှိသည်ဟု အမြဲတမ်းရှုမြင်ထားခြင်းရှိ၏။ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်အားဘုရားသခင်နေရာချထားပေးသော ဒေသန္တရအသင်းတော်အား၊ သခင်ယေရှုသည် ဘယ်လောက်မျှ ချစ်သည်ကို စဉ်းစားဆင်ခြင်တာမျိုး ကျွန်ုပ်တို့ရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သဘောသည် ယေရှု၏ ချစ်ခြင်းအား၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိပါသလား၊ဆိုတာကို မိမိကိုယ်ကို မေးမြန်းဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ “ငါတို့သည် အသင်းတော်ကို ချစ်ပါသလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘုရားကျောင်းတက်ရုံမျှသာ ဖြစ်ကြပါသလား၊” အသင်းတော်၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တော်၏ အဓိကဆန္ဒမှာ၊ အောင်မြင်ကြီးပွားမှုနှင့်၊ မိမိ၏ဘုန်းတော်သည် ရှု ထောင့်တိုင်း၌၊ ရောင်ပြန်ဟပ်ရှိခြင်းနှင့်၊ ၎င်းနေရာ(အသင်းတော်)သည် မိမိလူစုများအားဖြင့်၊ အသီးသီးသော အမှုတော်မြတ် ဆောင်ရွက်ရာအဖြစ်၊ မြင်တွေ့ရဖို့ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် အကြောင်းရင်းများစွာဖြင့်၊ နည်းလမ်းများစွာသုံးကာ၊ အသင်းဝင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဘုရား သခင်၏လူစုများ မိဿဟာယဖွဲ့ရာ၊ ဒေသန္တရနေရာ၏လုပ်ငန်းများနှင့် ကြိုးပမ်းမှုများသို့ ဆက်လက်အပ်နှံခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးမှ၊ နောက်ပြန်ဆုတ်ကာ၊ ဘာကြောင့်အသင်းဝင်ဖို့ မလိုအပ်ကြောင်း၊ အကြောင်းပြချက်များစွာ ပေး တတ်ကြ၏၊ သို့သော်လည်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ၊ ထပ်ပြောပါရစေ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ သမ္မာကျမ်း စာ၌၊ အုတ်မြစ်မချထားကြသူများဖြစ်၍၊ ဘယ်တော့မှလည်း ချထားကြမည့်သူများ မဟုတ်ကြပေ။
ဒေသန္တရအသင်းတော်သည် အစဉ်အမြဲပင်၊ မာရ်နတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံရစမြဲပါ၊ သူသည် ဖြစ်နိုင်ရင်၊ ယုံကြည်သူတိုင်းကို “ဂျုံစပါးအဖြစ်မှ” ပြောင်းလဲစေဖို့ ကြိုးစား၏ ထို့နောက် သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ စိတ်ဆန္ဒမှာ ဆက်နွယ်မှုများကို တိုက်ခိုက်ဖို့၊ သံသယနှင့် အယုံကြည်ကင်းမဲ့ခြင်း မျိုးစေ့ကြံဖို့ ကျွန်ုပ်တို့၏အချင်းချင်း ရှုမြင်ပုံများကို၊ ပျက်သွား စေဖို့ ကြိုးစားကာ၊ အထီးကျန်ခြင်းထဲသို့ ပို့ဆောင်ရန်ကြိုးစား၏၊ သူသည် အချို့တို့အား၊ သူတို့၏ဝေးကွာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ သတိပေးကာ၊ သူတို့သည် နာကျင်ခံစား၍ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းရှိစေရန် အာရုံစိုက် ထား၏၊ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအုပ်စုမှ၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခွဲခွာစေခြင်းငှါ၊ သူတတ်နိုင်သည့်နေရာတိုင်း တွင်၊ နာကျင်မှုနှင့် အနှောင့်ယှက်များ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်၏၊ နောက်တဖန်၊ မိဘမဲ့ဖြစ်စေတတ်၏။
ကျနော်တွေ့ကြုံသော ကိစ္စတစ်ခုတိုင်း၌၊ ဤအရာဖြစ်ပျက်သည့်နေရာတွင်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီသည် အေး စက်၍၊ ဘဝမဲ့ကာ၊ အပြစ်ရှာသောသူများဖြစ်ကြသည်ကို အမြဲကွဲပြားလိမ့်မည်ဟု၊ ကျနော် မမှတ်ယူပေ။ သို့ဖြစ် ၍၊ အကယ်စင်စစ်၊ ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းကို ဖြည့်စွက်ဖို့ ဘဝ၌၊ လှုပ်ရှားမှုများများရှိနေလင့်ကစား၊ တည်မြဲသောအသီးမျိုး အမှန်တကယ်မရှိတတ်ပေ။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင် အကယ်၍ လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဒေသန္တရအသင်းတော်မှ သီးခြားနေလာလျှင်၊ “အုတ်ဂူပြစ် ဒဏ်ပေးခြင်း” တစ်ခုအဖြစ် ထင်မှတ်ယူခြင်းရှိ၏၊ စိတ်မကောင်းစရာဖြင့် ယနေ့ခေတ်တွင်၊ လူများစွာတို့သည် ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြစ်ဒဏ်ပေးနေကြတာသည် ဝမ်းနည်းစရာပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏စိုး ရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် နစ်နာချက်များသို့ တွယ်ကပ်ခြင်းကြောင့် သူတို့သည် မာရ်နတ်၏တိုက်ခိုက်မှုကို တောင့် မခံနိုင်ဖြစ်လာကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ရာ၌၊ ပိုပိုပြီးမထိရောက်သူများ ဖြစ် လာကြ၏။
သူတို့၏စိတ်သဘောထား၌ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း တည်မြဲမှုကြောင့် ဒေသန္တရအသင်းတော်အပေါ် အရှုံး ပေးသောသူများစွာ ရှိ၏၊ ထိုသူတို့သည် အရာများကို သူတို့နည်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မည်၊ သူတို့သည် မိမိတို့ ၏ ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုထဲသို့ မိမိတို့တတ်ကျွမ်းမှုများ၊ အားအင်များနှင့်စိတ်အားပြင်းပြမှုများကို သွန်းလောင်း တတ်ကြ၏။ ဒါပေမဲ့၊ မလွှဲမသွေပင် သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရိုးသားစွာကြည့်သောအခါ၊ ကြည့်ရှုလျှင်၊ တစ်ခြားသူများကဲ့သို့၊ တည်မြဲတဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို မရှိတတ်ပေ။
“ဘုရားကျောင်းသွား” ရုံမျှသည် ဘုရားသခင်က မိမိ၏သားသမီးများအတွက် အကြံအစည်မဟုတ်ခဲ့သလို၊ ဘယ်တော့မှလည်း ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပေ၊ ဘုရားသခင်သည် နီးကပ်သောဆက်နွယ်မှု လိုအပ်ချက်နဲ့ ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့၏။ ကိုယ်တော်၏စိတ်ဆန္ဒမှာ ငါတို့သည် “တစ်ယောက်ဝန်တစ်ယောက် မျှဝေကာ၊ ကောင်းသော လုပ်ဆောင်မှုဘက်သို့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးတွန်းပို့ပေးဖို့နှင့် အချင်းချင်းအတူငိုကြွေး၊ဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်ဖြစ်ပြီး ဤတောင်းဆိုမှုအားလုံးသည် အချင်းချင်းယုံကြည်မှု၌၊ နီးနီးကပ်ကပ်အသက်ရှင်ဖို့ “အဆစ်အပိုင်းများသည် အားဖြည့်သဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံးသည် စေ့စပ်ထုံးဖွဲ့လျက်၊ အသီးသီးအင်္ဂါများ ကိုယ်ငန်းကိုယ်တာအတိုင်း ပြုပြင် သည်နှင့်အညီ၊ မိမိကိုယ်ကို မေတ္တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းငှါ ကြီးပွားစေတတ်၏” (ဧဖက် ၄:၁၆)၊ ဟူ၍ ရှိထားဖို့ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလေ့လာမှုတွင် ကဏ္ဍသုံးခုကို အတူတကွစူးစမ်းလေ့လာကြပါလိမ့်မည်။
စကြဝဠာဆိုင်ရာ ထူးထူးကဲကဲ အောင်မြင်၍ နိုင်လိုမင်းထက်လုပ်လိုက်သောအသင်းတော်
စကြဝဠာဆိုင်ရာ ဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်း အသင်းတော်
အသင်းတော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်နွယ်မှု
Nowell ၏ ဓမ္မပုစ္ဆာဝိသဇ္ဇနာတွင် စကြဝဠာဆိုင်ရာအသင်းတော်ကို “အသင်းတော်သည် ထာဝရမှ ထာဝရအသက်တာသို့ ဘုရားသခင်ကြိုတင်ခွဲခန့်တော်မူသည့် သစ္စာရှိသူအားလုံး၏ စကြဝဠာဆိုင်ရာ အသင်း အဖွဲ့ဖြစ်၏” ဟုဖော်ပြထားပြီး၊ ဤဖော်ပြချက်၌ အမှားတစ်စုံတစ်ရာ ငါတို့ရှာတွေ့လိမ့်မည်လို့ ကျနော်မထင်မိ ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့၊ ဤအချက်ထက် ပို၍တိကျအောင် ပြောဆိုရမည်မှာ ထူးထူးကဲကဲအောင်မြင်သော အသင်း တော်နှင့် နိုင်လိုမင်းထက် လုပ်လိုသောအသင်းတော်ဟူ၍ နှစ်မျိုးဖြင့် ပိုင်းခြားနိုင်သည်။
ထူးထူးကဲကဲအောင်မြင်သော အသင်းတော်သည် ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါးသို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့က အနားယူဖို့ သွားနှင့်ပြီးဖြစ်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့အား၊ စောင့်စားနေကြသူများဖြစ်ပြီး၊ နိုင်လိုမင်းထက်လုပ်လိုသော အသင်းတော် သည် ယခုတွင်ပင် ဤနေရာ၌ သခင်ဘုရားကို အစေခံနေ၍ သခင့်အတွက် အသင်ရှင်နေကြသော သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်၏။
အပိုင်းခြားနှစ်မျိုးထက်မက ပို၍များပြားသောအချက်များဖြင့်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်းခြားနိုင်ပါသေး၏။ မြင်နိုင် သော အသင်းတော်နှင့် မမြင်နိုင်သောအသင်းတော် − အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ခရစ်ယာန်ရော၊ ခရစ်ယာန်မ ဟုတ်သောသူတွေလည်း၊ ပါဝင်သောစုဝေးမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းတော်တစ်ခုနှင့်၊ မမြင်နိုင်သော အသင်းတော် − ယင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သိကျွမ်း၍၊ မိမိတို့နာမည်များအား၊ “သိုးသငယ်စာအုပ်ထဲ”တွင် ရေးသားခြင်းရှိသည့် အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ်ကာလရှိ ယုံကြည်သူအားလုံး ဖြင့်၊ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်၏။
ဂရိစကားလုံးအတွက် အသင်းတော်ကို “ekklesia” ဟု ခေါ်ပြီး− စုဝေးခြင်းတစ်ခု၊ (ဘာသာရေးဆိုင်ရာ) လူစုလူဝေးဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်၏ မူရင်းစကားလုံး ἐκκλησία, ας, ἡ ဖြစ် ပြီး ၎င်းသည် စာသားအရနိုင်ငံသားများ၏ ဆက်စပ်မှု၌ အသုံးပြုခြင်း ရှိ၍၊ “အတူတကွဆင့်ခေါ်ထားသော (သို့) ခေါ်ထုတ်လိုက်သောလူစု” ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှု သောဆက်စပ်မှု၌၊ “တန်ခိုးကြီးသောစုဝေးခြင်းအဖြစ် အတူတကွဆင့်ခေါ်သော ဘုရားသခင်၏ လူစုဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင် ၎င်းသည် အဆောက်အအုံနှင့် ဆက်စပ်မှုအဖြစ်၊ အသုံးပြုထားခြင်းမရှိမှန်း၊ ကောင်း ကောင်းသတိရစေပါ၏။ ဒါပေမဲ့ ၎င်းသည် ဒေသန္တရလူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍သာ ဖော်ပြပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အသင်းတော်သည် “အုတ်နှင့်အင်္ဂတေ”ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောအရာမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ခမ်းနားကြီး ကျယ်သော အဆောက်အအုံတစ်ချို့(သို့) ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့်၊ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုမဟုတ် ကြောင်း၊ သို့သော် အသက်ရှင်ခြင်းတစ်ခု၊ အသက်ရှုနေသောသက်ရှိ၊ ဘုရားသခင်၏အသက်နှင့်အင်အားဖြင့်၊ တုန်ခါနေသောအရာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရှင်သန်နေသော နေ့ရက်နှင့်မျိုးဆက်သို့ ကန့်သတ်လို့မရနိုင်သောအရာတစ် ခု − သို့သော်၊ အနှစ်သာရသည် ကနဦးအကျဆုံးနေ့ရက်များဆီသို့ ပြန်လှည့်သွားကာ၊ အနာဂတ်ဆီသို့ ရှေ့ဆက် သွားရင်း ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာမည့်အချိန်နှင့် ကျွန်ုတို့အသက်ရှင်နေထိုင်သည့် ယနေ့ခေတ် ကျေးဇူးတော်ကာ လအပိုင်းအခြား၏ အဆုံးသတ်တွင်၊ ခရီးဆုံးမည့်အရာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ကြပါ၏၊
ထို့ကြောင့် ဤဆက်စပ်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်းတော်ရည်ရွယ်ချက်ကို စဉ်းစားတွေးတောသင့်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍၊ ကျနော်သည် ယခုတွင် ဤအကြောင်းကို ရှည်ရှည်ဝေးဝေးသွားမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အသင်းတော် သည် ဘုရားသခင်အား၊ ကိုးကွယ်ရန်နှင့် အပြန်အလှန်တည်ဆောက်ရန် အတူတကွတွေ့ဆုံကြသည့် ရွေးနှုတ် ခံအမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စုဝေးခြင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ရုံမျှသာ ပြောသွားပါမည်။
အသင်းတော်သည် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပမာ သရုပ်ဖော်ကာ၊ သာဓကပေးထားသကဲ့သို့ ထိုမိသဟာယဖွဲ့ခြင်း၏ အသားပေးထားသည့် ထင်မြင်ချက်မှာ၊ ပြည့်နှက်သိပ်သွင်းထားသော ကျောက်များဖြင့်၊ ပြုလုပ်သောအဆောက် အအုံတစ်ခုဖြစ်၏၊ ၎င်းသည် သက်သေတည်ရှိရာနေရာတစ်ခုဖြစ်၍ ယင်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားအား၊ ဟောပြောခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းရှိကာ၊ ထိုအားဖြင့်၊ ပျောက်ဆုံးသောသူများနှင့် သေလုဆဲဆဲဖြစ်နေသော ကမ္ဘာကြီး၌ ခရစ်တော်တွေ့ထိစေဖို့၊ တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်၏။
ဤနေရာတွင်၊ မှန်ကန်ကြောင်း ထင်ရှားစေနိုင်သော မေးခွန်းထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီး၊ ၎င်းမေးခွန်းမှာ “ငါတို့သိ သောအသင်းတော်က ဘယ်ချိန်မှစတင်ခဲ့ပါသနည်း၊”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းအချိန်ကာလအတွက် သန္ဓေတည်ထားခြင်းရှိသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ကာလကြာရှည်ကတည်းက အကြံအစည်ဖြစ်၍၊ ၎င်းအမှန်တ ကယ်မတည်ရှိမီ ကာလရှည်ကတည်းက ဘုရားသခင်သည် အသင်းတော် တည်ရှိဖို့ကြိုတင်ခွဲခန့်ပြီးသားဖြစ် သည်၊ ထို့နောက် ယေရှု၏နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်သော “ဤကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်းတော်ငါတည်မည်” (မဿဲ ၁၆:၁၈) သည် အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ထောက်ရှုထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းမွေးဖွားလာသောအချိန်ကို ယောဟန် ၂၀:၂၂ ထဲတွင်၊ ပြောထားသည့် “ထိုသူတို့အပေါ် မှုတ်လျက် သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ခံကြ လော့” ဟု ယေရှုပြောသောအချိန်၌ ဖြစ်၏။
ဤအရာသည် တစ်ချို့အတွက် အံ့ဩစရာဖြစ်နိုင်ပေ၏ သို့ဖြစ်၍ နောက်ထပ်ရှင်းပြပေးဖို့ ကျနော်အခွင့်ထူးရပါ ၏၊ အသင်းတော်သည် ကာရာနီတောင်ကုန်းပေါ်မှာ ယေရှုခရစ်တော်၏ အသေခံခြင်းအားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းခံရသူများ ဖြစ်ကြသည့် ရွေးနှုတ်ခံရသော အပြစ်သားများအားဖြင့် စုဖွဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ထိုကြောင့်၊ ယေရှုခရစ် တော်၏ အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်ခင်ထိ ‘ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်း” မရှိနိုင်သလို အသင်း တော်သည်လည်း ထိုဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခံသူများဖြင့်၊ စုဖွဲ့ထားခြင်းမရှိနိုင်သေးပေ၊ ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းအပြီး၊ တစ်စုံတစ်ခု ကျရောက်ခြင်းမရှိမီထိ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ရာ။
မှတ်သားစရာ အရေးကြီးသောစကားလုံးမှာ မှုတ်၏ ဟူသောစကားလုံးဖြစ်၏ ၎င်း၏မူရင်းဂရိဘာသာစကား မှာ “emphusao” ဖြစ်ပြီး − အထဲသို့မှုတ်သွင်းသည် ဒါမှမဟုတ် ၎င်း၏ဂရိစကားလုံးဖြစ်သည်၊ ἐμφυσάω ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးတွင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းသာ အသုံးပြုထားခြင်းရှိပြီး၊ ၎င်းသည် ဂရိဘာသာစကား သည် ဟေဗြဲဘာသာစကား “naphach” စကားလုံးနှင့် − မှုတ်သွင်းသည် − မူရင်းဟေဗြဲစာဖြင့် נָפַח ဟု ကမ္ဘာဦး ကျမ်း ၂:၇ ထဲတွင် အသုံးပြုထားသည့် အဓိပ္ပါယ်နှင့်သွားတူညီသည်။ ၎င်းစကားလုံးအား၊ သက်မဲ့ဖြစ်နေသော အာဒံထဲသို့ အသက်ပေးခြင်းကို ညွန်ပြရာတွင် သုံးထား၏။
အာဒံ ထဲသို့ ဘုရားသခင်သည် အသက်ကိုမှုတ်သွင်းသောအခါ၊ “သူသည် အသက်ရှင်သောသတ္တဝါ ဖြစ်လာ၏၊” (ကမ္ဘာ ၂:၇)။ သို့ဖြစ်၍ ယေရှုသည် တပည့်တော်များထဲသို့ မှုတ်သွင်းသောအခါ “ယောဟန် ၂၀:၂၂” အသက်ရှင် သောဝိညာဉ်ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်လာကြ၏။ အဓိပ္ပါယ်မှာ သူတို့သည် သေခြင်းတရားကို ကျော်လွှားကာ အသက်ရ ကြ၏၊ အသင်းတော်သည် “ယောဟန် ၂၀:၂၂” ၌ အံ့အားသင့်ဖွယ် ပုံစံတစ်ခုအားဖြင့် အစပြုခဲ့လေ၏။ ထိုအရာ မှာ၊ ၎င်း၏သန္ဓေတည်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ်တည်ရှိလာခြင်းနှင့် မွေးဖွားလာခြင်းနှင့် ဖွင့်ပြလာခြင်း သည် နောက်ပိုင်းမှသာဖြစ်၍ “တမန်တော်ဝတ္ထု ၂” ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အသင်းတော်သည် ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် သန္ဓေတည်ထားပြီး တမန်တော်ဝတ္ထုထဲတွင် ဖွင့်ပြခြင်းရှိ၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၎င်း သည် ပင်တေကုတ္တေနေ့၏ အတွေ့အကြုံအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာလေ၏။
အမှန်တော့ ပင်တေကုတ္တေနေ့သည် ဂျူးလူမျိုးများဆိုင်ရာ ပွဲတော်နေ့ရက်ဖြစ်ပါသဖြင့် ပွဲတော်ဆင်နွဲဖို့ ကမ္ဘာတ ဝန်းမှ၊ ဂျူးများသည် အတူတကွ စုရုံးလာကြသည့်နေ့ရက် ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍၊ ဤအချိန်တွင် ယေရှုက “ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံတပည့်တော်များ” အား ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်မြတ်နှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် သူတို့အပေါ် ဩ ဇာပေးအပ်ခြင်းငှာ “အပေါ်ထပ်အခန်း” ၌ စုဝေးကြဖို့ ပြောဆိုလေ၏။ “တမန်တော်ဝတ္ထု ၁:၈” တွင် ကျွန်ုပ် တို့မြင်တွေ့ရသည်အတိုင်း၊ သူတို့သည် ဤအရာကိုပြုကြ၏၊ ထိုနောက် သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၌ ဗတ္တိဇံခံကြရာ၊ ယင်းဖြစ်စဉ်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ၎င်းသည် ယောဟန်၂၀:၂၂ ထဲက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကို လက်ခံရရှိခြင်းမှ၊ ထူးခြားပြီး သီးခြားသောတွေ့ကြုံမှုတစ်ခုကို၊ ပြသပေးနေကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သိ ရှိကြပါ၏။
ဤအပိုင်းလေ့လာမှု နိဂုံးမချုပ်မီ၊ နောက်ထပ်အရာတစ်ခု ကျနော် ဖော်ပြလိုပါတယ်၊ ယင်းအရာမှာ၊ ယေရှုခရစ် ၏အသင်းတော် သန္ဓေတည်ခြင်း၊ မွေးဖွားခြင်းနှင့်ဖွင့်ပြြခင်းတို့နှင့် ဆီလျော်သောအရာနှင့် ၎င်း၏နိုင်ငံတော်၏ သော့များနှင့် ဆက်စပ်နေမှုများဖြစ်သည်။
မဿဲ ၁၆:၁၇− ၁၉ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်ရှုရသည်မှာ “ယေရှုကလည်း ရိုမုန်ဗာယောန၊ သင်သည် မင်္ဂလာရှိ၏၊ အကြောင်းမူကား အသွေးအသားသည် ဤအကြောင်းအရာကို သင့်အားဘော်ပြသည်မဟုတ် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ဘော်ပြတော်မူသတည်း၊ ငါဆိုသည်ကား သင်သည် ပေတရုဖြစ်၏ ဤ ကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်းကို ငါတည်မည် ထိုအသင်းကို မရဏာနိုင်ငံ၏တံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ၊ ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်၏ သော့တို့ကိုလည်း သင့်အားငါပေးမည်။ သင်သည် မြေကြီးပေါ်မှာ ချည်နှောင်သမျှသည် ကောင်း ကင်ဘုံ၌လည်း ချည်နှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ဖြေလွတ်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ် လျက် ရှိလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”
သော့များအကြောင်း ဖော်ပြခြင်းသည် တပည့်တော်များနှင့် ရင်းနှီးမှုရှိပြီသားဖြစ်၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ သူတို့သည် မိမိတို့နှင့်အတူ ဖွင့်ခြင်းရှိသည့် မြို့တော်တံခါးများကို အသုံးပြုခြင်းရှိတတ်လေ့ရှိကြ၏။ သို့သော် လည်း သူ့ကိုသာပေးထားသော ဤသော့များ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုမူ၊ အထူးသဖြင့် အားလုံးသောသူတို့က သဘော ပေါက်ကြမည်မဟုတ်ဘဲ ပေတရုကသာ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
၎င်းတို့သည် တကယ့်စစ်မှန်သည့် သော့များမဟုတ်ပေ။ သို့သော် ၎င်းဖြင့် ပေတရုသည် ဧဝံဂေလိနယ်ပယ်ကို ဖွင့်လှစ်ကာ နေရာတကာမှာရှိသည့် လူသားများထံသို့ အသက်တံခါးကို ကျယ်ပြန့်စွာဖွင့်ပြပေးမည့် အခွင့်အာ ဏာနှင့် အခွင့်အလမ်းသော့များဖြစ်၏.
သော့များအား ပထမဆုံးအသုံးပြုခြင်းမှာ၊ ပင်တေကုတ္တေနေ့၌ဖြစ်ပြီး၊ ပေတရုသည် တပည့်တော်များအလယ် မှာ ရပ်၍ တရားဟောကြားခဲ့ရာ လူပေါင်း ၃၀၀၀ သည် ယေရှုခရစ်တော်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြ၏။ ဒုတိယ မြောက်သော့များ အသုံးပြုခြင်းကို “တမန်တော် ၈:၁၄−၁၉” တွင် ဖြစ်ပြီး၊ ပေတရုသည် ဂျူးလူမျိုးများမုန်းတီး သော ရှမာရိမြို့သားများထံ တရားဟောခဲ့ရာ၊ ယခုတွင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံကြပြီး အတား ဆီးများချိုးဖျက်ခြင်းရှိလေပြီ။ တတိယကြိမ်သော့များအသုံးပြုခြင်းကို “တမန်တော် ၁၀:၄၄−၄၈” တွင် တွေ့ရ ၏၊ ယင်းတွင် ပေတရုသည် တစ်ပါးအမျိုးသားများထံ ယေရှုအကြောင်းနှင့် ထိုယေရှုသည် မည်သူဖြစ်သည်ကို ပြောကြားခဲ့ရာ၊ ထိုသူတို့သည်လည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံယူကြ၏။
ထို့ကြောင့် သော့များသည် ဂျူးလူမျိုးများ၊ ရှမာရိလူမျိုးများနှင့် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ထံ စုစုပေါင်းသုံးကြိမ်တိတိ အသုံးပြုထားခြင်းရှိခဲ့၏။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သော့များသည် နေရာတကာမှာရှိတဲ့ လူသားအားလုံး၏ အတားဆီးများအား ထာဝရဖယ်ရှားပေးရေးနှင့် ဧဝံဂေလိတရားအား လူမျိုးနွယ်စုအားလုံးနှင့် လူမျိုးတကာဆီ သို့၊ စကြဝဠာလုံးဆိုင်ရာ ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးပါ၏။
အရင်က လေ့လာချက်ကဏ္ဍတွင် စကြဝဠာဆိုင်ရာအသင်းတော်နှင့် ပတ်သက်၍၊ ပြည့်နှက်သိပ်သွင်းထားသော ကျောက်များဖြင့်ပြုလုပ်သော အဆောက်အအုံတစ်ခုဟူ၍ စကားစုတစ်ရပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့သုံးထားကြပါ၏။ ထိုအ ရာသည် ယေရှု၏အသင်းတော် အမှန်ဖြစ်ပေ၏။ သို့သော်ငြားလည်း၊ တစ်ချိန်ထဲမှာ ခရစ်တော်၏အသင်းတော် သည် သီးခြားမှု၊အလွန်နက်နဲမှုနှင့် ခမ်းနားကြီးကျယ်သော ဂုဏ်ပြုခြင်းကဏ္ဍကို ပြည့်စုံစေရေးနှင့်၊ သက်သေခံ ချက်ဗဟိုအချက်ဖြစ်ရေးတို့ ရှိ၏။ ယင်းအားဖြင့်ပင် ဧဝံဂေလိတရားသည် လူသားအားလုံးထံသို့ စောင့်ထိန်းမှုရှိ ၍၊ ပြန့်နှံ့ပေါက်ပွားခြင်းရှိပေသည်။ ဧဝံဂေလိလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကောင်းကင်တမန်များအား တာဝန်ပေးခြင်းမ ရှိပေ။ သို့သော်၊ အသင်းတော်ကိုသာ ပေးထားသောကြောင့်၊ ဧဝံဂေလိပြန့်နှံ့စေခြင်းသည် ၎င်း၏ပထမဦးစား ပေးဖြစ်ကာ၊ ပျောက်ဆုံးနေသော ကမ္ဘာကြီးဆီသို့၊ ယေရှုခရစ်တော်အမှန်ရှိသည်ကို သိကြားစေဖို့ ၎င်းသည် တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါးသို့၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာများ အပ်နှံကြသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာ ပီတိ ဖြာခြင်းတည်မြဲဖို့သည် အရေးကြီး၍၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကို ဖမ်းဆီးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့မကြိုးပမ်းကြသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာထဲ၌၊ ဘုရားသခင်၏အကြံစည်တော် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အလိုတော်များကို တိုက်ရိုက်ဆန့် ကျင့်စွာ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေကြသည်ကို သိမှတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးလှပါသည်။
“မာကု ၁၆:၁၅” ဖော်ပြထားသည့် “သင်တို့သည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှသို့ သွား၍ ဝေနေယျသတ္တဝါအ ပေါင်းတို့အား၊ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြလော့၊” ဟု၊ တွေ့ရှိထားသည်အတိုင်း ယေရှုခရစ်တော်၏ စေခိုင်း ချက်ကို နာခံခြင်းသာလျှင်၊ ယေရှုခရစ်တော်အား၊ ကျေနပ်အားရစေသော အသက်တာမျိုးကို၊ ကျွန်ုပ်တို့အား အစဉ်မျှော်လင့်နိုင်စေပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သွန်းလောင်းသော၊ ကိုယ်တော်၏ ကြွယ်ဝသောကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို၊ သိရှိနိုင်စေပေသည်။
အသင်းတော်ကို အထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွစုဝေးနိုင်သော “အုတ်ခဲနှင့်အင်္ဂတေ”တို့ဖြင့်၊ ပြုလုပ်သောအ ဆောက်အအုံမျိုးမဟုတ်ကြောင်း၊ အထက်မှာ ကျနော် ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါ၏။ သို့ဖြစ်၍၊ ထိုအသင်းတော်သည် အဖွဲ့ အစည်းတည်ထောင်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဒါပေမဲ့၊ အသက်ရှင်၍ ခရစ်တော်၏အသက်တာဖြင့်၊ တုန်ခါမှုရှိသော ဇီဝ သက်ရှိတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂျူးအသင်းတော်နှင့်ပတ်သက်၍၊ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ဖတ်ရှုသောအခါ၊ သင်သည် တစ်စုံတစ်ခုမှတ်သားမိပြီး၊ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျနော် သေချာမှုရှိပါ၏။ ဒေသန္တရနှင့်စကြဝဠာဆိုင်ရာအသင်းတော်နှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ ဓမ္မသစ် ကျမ်းကို လေ့လာမှုက စည်းမျဉ်းဉပဒေများ ဆန့်ကျင်သောနိယာမများအဖြစ်၊ ထင်မှတ်ခြင်းရှိသော အချက်အ လက်များအား၊ ချမှတ်ထားခြင်းရှိသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ၊ ပြသပေးထားပါ၏၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲ၌၊ အသင်းတော်၏ ထူးကဲခြားနားသော အင်္ဂါရပ်မှာ၊ ရိုးရှင်းခြင်း၊ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ယနေ့တွင်၊ တိတိကျကျ ဖြစ်သင့်ရှိသင့်သောအရာ ဖြစ်သည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသားရာတွင်၊ အမြဲတမ်းအထူးပြုထားသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ခရစ်တော်ယေရှုနှင့်အတူ ပိုင်ဆိုင်ကြသည် “ဝှက်သောအသက်တာ” အပေါ် နေရာချထားခြင်းဖြစ်၍ ထိုအသက်တာ ၏ အပြင်ပန်းပေါ်လွင်မှုကို ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်တို့ နှစ်ရပ်လုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းတစ်ခု၌ မြင်တွေ့ရခြင်းရှိပေသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက “အသီးအားဖြင့် အပင်၏သဘောကို သင်တို့သိကြ၏” ဟု ပြောဆိုရာတွင် အချည်းနှီးသက် သက်ပြောထားသည်မဟုတ်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏အသီးများဖြစ်သည့် ပြောဆိုပုံနှင့်ဟန်အမူ အရာဆိုင်ရာ ပြုမူကျင့်ကြံမှုက၊ ယေရှု၌ရှိသောအသက်တာကို ကျွန်ုပ်တို့၏နှုတ်စကားဖြင့် သက်သေခံခြင်းကို သစ္စာပျက်စေမည်၊ ဒါမှမဟုတ် ထိန်းသိမ်းဖက်တွယ်ထားစေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ရှေးဆိုရိုးစကားတစ်ခုတွင် “သင်သည် လူတစ်ချို့ကို တစ်ချိန်တစ်ခါမှာ အရူးလုပ်နိုင်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါလိမ့် မည်၊ ဒါပေမဲ လူအားလုံးကို အချိနိတိုင်းတွင်၊ သင်သည် အရူးမလုပ်နိုင်ပေ၊” ဟူသောစကားသည် ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်၏လျှောက်လှမ်းမှုသို့ ဆက်နွယ်မှု၌ လုံးဝပင် ကွက်တိဆင်တူနေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စဉ်းစားတွေးတောတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိ ကိုယ်ကို အရူးလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်များစွာကို အသုံးဖြုန်းတတ်ကြ၏။ ဒါပေမဲလည်း မြင်နေရသော အရာသာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားတာက ကျွန်ုတို့၏ဖြစ်ရပ်မဟုတ်သည့် ရှင်းလင်းတဲ့အ ချက်တော့ ထင်ကျန်ပါ၏။ ထို့ကြောင့်၊ ဒေသန္တရအသင်းတော်ရှိ ဘုရားသခင်ခွဲခန့်ထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ညီ အစ်ကိုမောင်နှမများနှင့် မိသဟာယဖွဲ့ခြင်းအရာ၌၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၊ ပွင့်လင်းမှုရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သူတို့နှင့်အ တူ ဤအကြောင်းအရာများ မျှဝေခြင်းကို၊ အားလုံးက မြင်တွေ့၍၊ ရှုမြင်ခြင်းရှိပါ၏။
ဤသီးသန့်ကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍၊ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖို့ ကျနော် မရည်ရွယ်ထားပါဘူး၊ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏ ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသင်းတော်၏သီးခြားအချက်လေးမျိုးကိုသာလျှင် ကျနော် ချပြသွားပါမည်။
အသင်းတော်သည် တစ်ခုတည်းဖြစ်၏၊ အကြောင်းမှာ၊ ခရစ်တော်၌စည်းလုံးမှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏၊ အသင်း တော်သည် သန့်ရှင်း၏၊ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းကို ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ် ၏။
အသင်းတော်သည် သမာသမတ်ရှိ၏ အကြောင်းမူကား ၎င်းအား၊ နေရာတကာမှာ ဟောပြောခြင်းရှိပြီး၊ ၎င်း၏ အသက်တာသည် နေရာ(သို့) အချိန်ကာလအပေါ် မှီတည်းသည်ဖြစ်၍ တမန်တော်ဆိုင်ရာဖြစ်၏၊ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော်၊ ၎င်းသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတမန်တော်သွန်သင်ချက်များ မှန်ကန်မှုရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖြစ်မှန်ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ အခြားစကားလုံးနဲ့ပြောရရင်၊ ယေရှုခရစ်တော်နောက် လိုက်သူအဖြစ်၊ ဝန်ခံသောသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် သူကိုယ့်သူ(သို့) သူ့အတွက် သာမန်အဖြစ် တွေးမှတ် ယူဖို့မဟုတ်ပေ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ခရစ်ယာန်များသည် မိမိတို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာအိမ်တော် “အတွက်သက်ရှင်ရာတွင် အမှားမပြုမိဘူးဆိုတာမျိုးတော့ရှိခဲလှပေ၏။ ဘုရားသခင်၏သားမှန်သူတိုင်းတွင်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာအိမ်တော် ရှိပေ၏။ ဘုရားသခင်၌ မိဘမဲ့ကလေးမရှိပေ။ ယေရှုက၊ ကယ်တင်သောအခါ၊ ခမည်းတော်ဘုရားက တစ်ချိန် တည်းမှာပင် သားသမီးသစ်တို့ကို အိမ်တော်ထဲသို့ နေရာချပေးထား၏၊ ယင်းအထဲ၌ သူ/သူမသည် ချစ်ခြင်း မေတ္တာ၊ ပြုစုယုယခြင်းနှင့် လမ်းပြပို့ဆောင်မှုများ လက်ခံရရှိသလို ၎င်းအားဖြင့်ပင်၊ ထောက်မမှုများရှာတွေ့ လေ၏။
အဆိုးဆုံးအရာမှာ “မာန်မာန” ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအရာက ခရစ်ယာန်များအား ဝိညာဉ်ရေးရာအိမ်တော်မှ ဝေးကွာစေ ကာ၊ ထိုအကြောင်းကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တတွေ အတူတကွ တွေးတောဆင်ခြင်ပြီးသောအရာများ၊ အားလုံးတို့ကို ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စကြဝဠာဆိုင်ရာအသင်းတော်မှ ဒေသန္တရအသင်းတော်ဘက်သို့ လှည့်ပြောင်းစေကြပါ ၏၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ လေ့လာကြည့်ရှုရန်မှာ −
ဒေသန္တရအသင်းတော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်နွယ်မှုက ဘာလဲ။
ဒေသန္တရအသင်းတော်၏ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် အာဏာသက်ရောက်မှုက ဘာလဲ။
ဒေသန္တရအသင်းတော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားက ဘာလဲ။
အသင်းတော်ဟူသောစကားလုံးကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အခါ ၁၁၀ ခန့် ပေါ်ထွက်လာပြီး၊ ၎င်းတို့အနက် အခါ ၂၀ ခန့်သာ စကြဝဠာဆိုင်ရာအသင်းတော်နှင့် သက်ဆိုင်နေ၏။ ထို့ကြောင့် ထိုမျှသောအကြိမ်အရေအတွက်သည် သီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းရှိသော်၊ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်၏ အလွန်မြင့်မားသော အတွေးအကြံစည်တော်ကို ညွန် ပြထားခြင်းရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် ၎င်းအတွေးအမြင်မျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ရှိစေခြင်းအကြာင်းဖြစ်သည်။
တမန်တော်ဝတ္ထုစာအုပ်သည် ယေရှု၏တပည့်တစ်ဦးဖြစ်သည် ရှင်လုကာအားဖြင့် A.D ၆၃ခန့်တွင်၊ ရေးသား ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နောင်လာမျိုးဆက်များအားလုံးတို့အဖို့ အသင်းတော်ပေါက်ဖွားလာပုံနှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးထားဖို့ မှတ်တမ်းတင်ပေးခြင်းတစ်ခုဖြစ်၏။
၎င်းက ပင်တေကုတ္တေနေ့၌ အဖြစ်ပျက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြခြင်းဖြင့်အစပြုလာ၏၊ ယင်းတွင်၊ လူ ပေါင်း ၃၀၀၀ ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆင်ခြင်ပြီးဖြစ်၍၊ ကျနော့်အနေဖြင့် သင့်အားသီးသန့်မှတ် သားစေလိုသည်မှာ၊ ထိုလူပေါင်း ၃၀၀၀ တို့သည် ဒေသန္တရမိသဟာရဖွဲ့ခြင်းထဲသို့ အတူတကွ အလျင်အမြန် လက်ချင်းချိတ် ပေါင်းသင်းလာကြကာ၊ ရေ၌ဗတ္တိဇံခံယူကြ၏၊ တမန်၊ ၂:၄၁−၄၂ တွင် တွေ့ရှိရသည်အ ကြောင်းအရာများကို ကျနော်နှင့်အတူ ဖတ်ရှုပေးကြပါ။ “ထိုစကားကို အသင့်နှလုံးသွင်းမိသောသူတို့သည် ဗတ္တိဇံကိုခံ၍၊ ထိုနေ့၌အရေအတွက်အားဖြင့်၊ သုံးထောင်မျှလောက်သော သူတို့သည် ဝင်ကြ၏၊ ထိုသူများသည် တမန်တော် တို့၏ဆုံးမဩဝါဒကိုခံခြင်း၊ အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်း၊ ပဌနာပြုခြင်းတို့ကို အမြဲဆောင် ရွက်၍ နေကြ၏”
အသစ်ပြောင်းလဲသောသူများ၏ အသက်တာ၌ပါဝင်လာသည့် သီးခြားအရာ လေးမျိုးကို သင်သည် တစ်ခါ တည်းမှတ်သားရပါလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍၊ ကျနော်အနေဖြင့် အံ့အားသင့်စရာ တစ်စုံတစ်ရာ အလောတကြီးမရှိ ကြောင်း၊ ဖော်ပြပေးလိုပါသည်။
တမန်တော်များ ဩဝါဒ၊ ဉပမာ − ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း
မုန့်ဖဲ့ခြင်း − ဉပမာ − ပွဲတော်
ပဌနာ − ဉပမာ − ဆုတောင်းတွေ့ဆုံခြင်း
ဤချိန်ခါအတွက် တစ်အုပ်လုံးလေ့လာဖို့က အချိန်ကြာမြင့်လှပေမည်။ ဒါပေမဲ့ “တမန် ၆:၁−၈ − တမန် ၁၁: ၂၆−၃၀ − တမန် ၁၃:၁−၅” ထဲတွေမှာ ဒေသန္တရအသင်းတော်၏ အရေးကြီးသော ကြီးထွားမှုကို ပြသပေးသော ညွန်ပြချက်များရှိ၏၊ ဒေသန္တရအသင်းတော်သည် လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်မှုရှိကြောင်း၊ မြင်တွေ့ရ၏၊ N.B − အသင်းဝင်များအကြား လိုအပ်မှုရှိသည့်နေရာများတွင် ငွေကြေးအကူအညီများ ထောက်ပံ့ပေးကြ၏။
တမန် ၁၄:၂၃ တွင် “အသင်းတော်များတို့၌ သင်းအုပ်တို့ကို ခန့်ထား၍” ဟုဆိုထားသကဲ့သို့ တမန်တော် ရှင်ပေါလုသည် ပြောင်းလဲသူများ ပုံမှန်အခြေခံတစ်ခုအပေါ်၊ တွေ့ဆုံမှုများရှိထားသည့်တိုင် မိမိ၏သာသနာ လုပ်ငန်းနှင့် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းသည် စုံလင်ပြီဟု မထင်မှတ်ခဲ့ပေ။
ပေးစာများသည် ဒေသန္တရဆိုင်ရာ ယုံကြည်သူပရိသတ်များထံသို့ တမန်တော်များအားဖြင့် ရေးသားထားသော မှုတ်သွင်းခြင်းရှိသည့်စာများဖြစ်ပြီး၊ နေ့စဉ်ဘဝနှင့်ပတ်သက်၍ တိကျရှင်းလင်းတဲ့ ဆုံးမဩဝါဒများနှင့် သခင်ဘုရား၏ပွဲတော်နှင့် နည်းဉပဒေများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသန္တရအသင်းတော်၏ လုပ်ဆောင်မှုအကြောင်း တို့ပါဝင်၏။ သည့်အပြင် သင်းအုပ်များနှင့်သင်းထောက်များ၏ တာဝန်များကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားကြပါ၏။
ဒေသန္တရအသင်းတော်အား အမြင့်မြတ်ဆုံးလေးစားခြင်းနှင့် ဂုဏ်ပြုခြင်းရှိကြောင်းကို၊ စာရေးသူများ အထူး သဖြင့်၊ ပေးစာအများစုကို၊ ရေးသားသည့်ရှင်ပေါလုက ဖော်ပြထားကြောင်း၊ သိသာထင်ရှားလှပေ၏၊ ဤအ ကြောင်း၏ဉပမာကို “၁ကော ၁၁:၂၂” ရှိရှင်ပေါလုက ကောရိန္တုမြို့ကယုံကြည်သူများကို၊ ဆုံးမသောပုံစံတွင်၊ တွေ့ရှိနိုင်ပါ၏၊ ၎င်းတွင် ရှင်ပေါလုပြောဆိုထားသည်မှာ “ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကို မထီမဲ့မြင် ပြုကြ၏” ဟူ၍ဖြစ်၏၊ ဤနေရာတွင်၊ သူသည် သီးသန့်အမှားကဏ္ဍကို၊ မဖော်ပြခဲ့ကြောင်း၊ မှတ်သားပါ၊ ၎င်းသည် ဒေသန္တရယုံကြည်သူအသင်းအဖွဲ့အပေါ်၊ အမှား၏ထိရောက်မှုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် လွန်စွာအရေးပါသည့် အရာ တစ်ခုဖြစ်၏။ တဖန်၊ “၁တိ ၃:၁၅” တွင် ရှင်ပေါလု၏အရေးသားထဲ၌၊ ကျွန်ုပ်တို့ထပ်တွေ့ရပြန်ပါ သည်။ ယင်းတွင်၊ အသင်းတော်၏အသက်တာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ခြင်းရှိရမည်ကို သင်းအုပ်ဖြစ်သော တိမောသေ အား၊ အသိပေးထားပါသည်။
ဟေဗြဲဩဝါဒစာစောင်ကို ရေးသားသူမသိရသော်လည်း၊ စာအုပ်က ကျွန်ုပ်တို့အား၊ အရင်တစ်ချိန်က ယုဒဘာ သာဝင်၊ ယုံကြည်သက်ဝင်သူများဖြစ်ကြသည့် ခရစ်ယာန်များသည် ယုဒထုံးတမ်းစဉ်လာများထဲ၌၊ ချည်နှောင် ထားခြင်းရှိခဲ့ကြကြောင်း၊ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာချက်၏ ရှေ့နောက်ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများ၌ ရှင်ပေါလု၏အရေးကြီးသော စကားလုံးကို “ဟေဗြဲ ၁၀:၂၅” တွင် တွေ့ရှိရသည်၊ ၎င်းတွင် ပြောထားသည်မှာ − “လူအချို့တို့သည် ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း အချင်း ချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှုကို မရှောင်လွဲကြနှင့်၊ အချင်းချင်းတို့ကို တိုက်တွန်းနိုးဆော် ကြလော့၊ ကာလအချိန်ရောက်လုနီးသည်ကို ထောက်သဖြင့် သာ၍ကြိုးစားကြ လော့”။ ဤအရာများသည် အကျွန်ုပ်တို့ ရင်းနှီးပြီးသားစကားလုံးများဖြစ်မည်မှန်း ကျနော်သေချာသိပါ၏။ သို့ဖြစ်၍ ရှင်ပေါလုသည် ခရစ်ယာန်များအား မိမိတို့တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ သိမှတ်ကြရေးတိုက်တွန်းနိုးဆော် ထားသည်။ သူတို့သည် ကြောက်ရွံ့မှု(သို့) ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်ခြင်းတွင်၊ ပေါ့ ဆလာကြ၏၊ သို့သော်၊ ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေ၊ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် သူတို့အသက်တာထဲ၌ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်း ဖြစ်ပေ၏။
ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးထဲ၌ပင်၊ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂ လာအားလုံးပေါ်၊ ပျော်မွေ့နိုင်ကာ၊ သူ့ရဲ့ချစ်မေတ္တာကိုခံစားရင်း၊ အထူးသဖြင့်၊ သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်နှင့် ထောက်ပံ့ပေးမှုများကို ခံစားနိုင်ပြီး၊ ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် တာဝန်ဝတ္တရားများ လည်းရှိကြပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချင်းချင်းအပေါ် တာဝန်ဝတ္တရားများရှိကြသည်သာမက သခင်ဘုရားသည်လည်း တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြသည်နည်းတူ၊ သခင်ဘုရားထံ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းမှ၊ ပေးဆောင် ရပါမည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းဖြစ်သော်ငြားလည်း၊ တာဝန်ဝတ္တရားဖြင့် ဘုရားကျောင်းကို တက်ရောက်ကြသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်လက်၍ တက်ရောက်နေရလိမ့်မည်။
ဤသို့ပြောဆိုခြင်းရှိသင့်၏ အို:! တာဝန်အရသာ တက်ရောက်လျှင် ဘုရားကျောင်းထဲ ကျနော်ရှိနေတာ အဓိပ္ပါယ်တော့သိပ်မရှိလှဘူး” ဟူ၍ဖြစ်၏၊ ထိုသို့ဖြစ်သည်ကို တစ်ယောက်ယောက်မြင်နိုင်ပေ၏၊ ဒါပေမဲ့ အား လုံးက၊ အလားတူပုံစံဖြင့် ပြောဆိုကုန်သော်၎င်း၊ အရာများကောင်းမွန်မှုမရှိသောကာလများ အတောအတွင်း သော်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခက်အခဲများရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင်သော်၎င်း၊ သို့တည်းမဟုတ်ခက်ခဲသော အချိန် ကာလများဖြတ်သန်းနေရချိန်တွင်သော်၎င်း၊ ဒါမှမဟုတ် ထင်သလောက် ကောင်းကောင်းခံစားမှုမရှိဟု ထင်နေ ရချိန်တွင်သော်၎င်း၊ ဘုရားကျောင်းမတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာများထဲ၌ ထိုအရာ များမှ၊ နာကျင်ဝေဒနာခံစားနေရပါသောကြောင့် ကဏ္ဍအများစုအတွက် အစီအစဉ်များအား မလုံမလဲဖြင့် အညှာတာဆုံးအနေဖြင့် တက်ရောက်ခြင်းမျိုးရှိလာပေသည်။
ယခုတွင်မူ ဒေသန္တရအသင်းတော်အပေါ် နေရာချခြင်းနှင့် သားသမီးအသီးသီးအတွက် ၎င်းသည် သိသာထင် ရှားစွာ ဘုရားသခင်၏ အကြံစည်တော်ထဲရှိသော အရေးပါသည့်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း အရေးကြီးမှုနှင့်ပတ်သက် ၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံမှားကင်းကြလောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကျနော် မျှော်လင့်မိပါသည်။ သို့သော်လည်း ယခုတွင် မူ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စီအသက်တာ၌ ဒေသန္တရအသင်းတော်တွင်ရှိထားသော အရေးကြီးလုပ်ဆောင်ချက် များဘက်သို့ ဦးလှည့်ကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့အတွေးအမြင်များဗဟိုပြုရမည့် အရေးကြီးတဲ့အချက် ၂ခုမှာ −
ဤကဏ္ဍနှစ်ရပ်သည် ဒေသန္တရအသင်းတော်တစ်ခုခု၌ နေရာကျသော လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို အမှန်ပင်အ ကျုံးဝင်စေသောအကြောင့်ဖြစ်၏။
ပင်တေကုတ္တေနေ့၌၊ လူပေါင်း ၃၀၀၀ ကယ်တင်ခြင်းရအပြီးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးတွေ့ရှိတဲ့အရာက ဘာလဲ၊ မှန်ပါတယ်၊ ထိုသူတို့သည် သွန်သင်ဆုံးမခြင်းထဲ ပါဝင်လာကြ၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဒေသန္တရအသင်းတော်သည် သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ခြင်း ဗဟိုအဖြစ် ရှုမြင်ခြင်းရှိကြောင်း၊ ရှင်းလင်းလှပါ၏၊ ၎င်းနေရာသည် ယုံကြည်မှုလွန် ကဲသော (Charismatic) ခေါင်းဆောင်များ၏ ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဘက်လိုက်မှုများမဟုတ်သလို၊ ကြီးမားသောအ သင်းတော်များနှင့် ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ဆင့်ကမ်းသဘာဝဖြစ်စဉ်များနှင့် အယူအဆများ လည်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါပေမဲ့၊ ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်စွာနှင့်ရိုးရှင်းစွာ၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်း စာသင်ကြားပေးရာနေရာ ဖြစ်ပေ၏။
သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းတာ၍ စူးစမ်းသောအခြားသင်ကြားခြင်းအားလုံးကို ဆန့်ကျင်၍ “တိုင်းတာရေးချိန်သီး” ဖြစ်ရပါမည်။ သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ခြင်းနှင့် ကိုက်ညီ မှုမရှိသော သင်ကြားမှုရှိသမျှတို့ကို ပယ်ရှားထားရပါမည်။
ခရစ်ယာန်လောက၌ “မိမိတို့သိရှိရန် လိုအပ်သောအရာဟူသမျှကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သွန်သင်ပေး သောကြောင့် အိမ်မှာပဲတူညီမျှစွာဖြင့် သင်ယူနိုင်ပြီး၊ ဘုရားမှုတ်သွင်းပေးခြင်းအားဖြင့် သူတို့သည် နားလည် နိုင်ကြသည်” ဟူသော ထင်မြင်ချက်မျိုး စွဲကိုင်သည့်သူ များစွာရှိ၏၊ ထိုအကြောင်း၏အစဉီးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျနော်သေချာပြောနိုင်တာကတော့ သူတို့၏အသက်တာများကို သေချာစမ်းစစ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်၏။ သူတို့၏ကိုယ် ပိုင်ကျရှုံးနေသော သားကောင်ဖြစ်သော ကျော်စော်ခြင်းအပေါင်းနှင့် သူတို့၏ထူးဆန်းသော ပြုမူကျင့်ကြ့ပုံများ ၏ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲ သူတို့သည် သက်ရှင်နေကြမှန်း သူတို့ကိုယ်တိုင်မသိကြပေမဲ့ တစ်ခြားသူအပေါင်းတို့ ရှေ့မှောက်တွင် ထင်ပေါ်နေပါ၏။
ဒေသန္တရအသင်းတော်သည် သွန်သင်ဆုံးမခြင်းပေးရာနေရာအဖြစ် ခွဲခန့်ထားခြင်းခံရ၏၊ ထိုသွန်သင်ဆုံးမခြင်း သည် “စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စူးစမ်းခြင်း” နေရာမဖြစ်သင့်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ မည်သူမျှမကျရှုံးနိုင်သော သူမရှိပေ။ သို့သော်လည်း အခြေခံသဘောအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ၏ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ နည်းစနစ်ကျ၍ အခြေခံကျသောသွန်သင်မှု ရှာတွေ့ရာနေရာဖြစ်၏။
ရှင်ပေါလုက တိမောသေအား၊ ဤစကားလုံးများဖြင့် တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခဲ့၏၊ “နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟော ပြောလော့၊ အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ကြိုးစားအားထုတ်လော့၊ အပြစ်ကိုဘော်ပြလော့၊ အလွန် ရှည်သောစိတ်နှင့်ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍၊ တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့” (၂တိ၊ ၄:၁)၊ သို့ဖြစ်၍၊ ဤနည်းစနစ်များ သည် ယနေ့တိုင်၊ ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်းဖြစ်နေဆဲပင်။
အကယ်၍ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတစ်ဦးက သူတို့သည် ဘယ်အသင်းတော်မှာ တက်ရောက်သင့်ကြောင်း မေးလာလျှင်၊ အဖြေကတော့ရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်၊ “ဘုရားသခင်က လမ်းပြပေးပါစေ၊ ထို့နောက် သမ္မာကျမ်းစာ ကို အပြည့်အဝ သင်ကြားပေး၍၊ လူများသည် ထိုနည်းအတိုင်း အသက်ရှင်ဖို့ ကြိုးစားမှုရှိသော အသင်းတော်ကို သွားပါ” ဟူ၍ဖြစ်ပါ၏၊
အမှုတော်မြတ်လမ်းစဉ်၌၊ ဘုရားသခင်အား တစ်စုံတစ်ရာ မပေးဆောင်နိုင်ဘူး၊ ဟူ၍ မိမိကိုယ်မိမိ ထင်မှတ်ကြ သည့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးအမြောက်အများ ရှိကြ၏။ ဤဖြစ်ရပ်တွင်၊ ပထမဦးစွာ ဘုရားသခင်အား ပြက် ရယ်ပြုရာကျစေပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ တတ်စွမ်းနိုင်မှုအား၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာထဲ ဘာမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ဖြစ် စေကာ၊ ဒုတိယချက်အနေဖြင့်၊ အနောက်ဘက်တန်းတွင် ထိုင်၍ ပျော်မွေ့ချင်ပြီး၊ ဒါပေမဲ့၊ ဘယ်တော့မှ အလှူမ ထည့်ဝင်သော လွှဲရှောင်ခရစ်ယာန်သာ အမှန်တကယ်ဖြစ်နေ၏။
အမှန်ဆိုသော်၊ သခင်ဘုရား၌ ကျွန်ုပ်တို့အမှုတော်မြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကဏ္ဍများစွာရှိပေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ပေးကမ်းနိုင်၏ “၁ကော၊ ၁၆:၂”
ကျန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိဟောနိုင်၏၊ “မဿဲ ၂၈:၁၉−၂၀”
တစ်ခြားသူ၏ဝန်ကို မျှဝေထမ်းဆောင်နိုင်၏၊ “ဂလာတိ ၆:၂”
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်းထောက်များနှင့်သင်းအုပ်များအဖြစ် အမှုတော်ထမ်းဆောင်နိုင်၏၊ “၁တိ ၃:၂”
သည့်အပြင် လိုအပ်ရင်ကြီးမားသော စာရင်းတစ်ခုကိုလည်း (ပါဝင်နိုင်သောနည်းလမ်း) ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ပံ့နိုင် ပါ၏။ ၎င်း(အပေါ်ကဖော်ပြချက်)သည် အသင်းတော်အများစု၏လုပ်ငန်းများကို ဘုရားသခင်၏ လူအနည်းစုက သာ၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိရသောအချက်ဖြစ်ပြီး၊ ကံဆိုးထောက်မစွာဖြင့်၊ အသင်းတော်သည် လူနည်းစုအပေါ်တွင် သာ ခေါက်ထားခြင်းရှိရသောအချက် ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော်လည်းပဲ၊ ဒေသန္တရအသင်းတော်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ဆောင်ရမည့်နေရာ အခြားမရှိပေ။
ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ဘုရားသခင်၏ အစေခံဖြစ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိ၍၊ ကိုယ်တော့်အတွက် အစေခံချင်သူရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ ဝိညာဉ်ရေးရာအိမ်တစ်လုံးရှိဖို့ လိုအပ်ပေ၏။ အများယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုရှိသော၊ ဘယ်ခေါင်း ဆောင်(သို့) ဘယ်အမှုတော်ဆောင်သူ (သို့) အဖွဲ့အစည်းအခြေပြုသော ဘယ်အသင်းတော်ကမှ အသင်းတော် အိမ်ကို ရှာမတွေ့နိုင်သူ (သို့) မိမိတို့၏ ဒေသန္တရအသင်းတော် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင်၊ အလုပ်မလုပ်ဆောင် သောသူအား၊ ဘယ်တော့မှအသုံးပြုကြမည်မဟုတ်ပေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သူ့အားချစ်ပြီး၊ ဂရုစိုက်ကာ ဆုတောင်းပေး နေကြသူတွေကြားမှာတောင်၊ အလုပ်မလုပ်ဆောင်နိုင်သော်၊ ဘယ်လိုဖြင့်သူစိမ်းတွေကြားမှာ တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်နည်း။
ဘုရားသခင်၏အသင်းတော် − ဘာနှင့်တူပါသနည်း
ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်နှင့် ပတ်သက်၍ အတော်အသင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါ၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍၊ ယခုတွင်မူ၊ အသင်းတော်တစ်ပါးတွင်၊ ရှာဖွေရမည့်အရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတွေးအမြင်တစ်ချို့ကို ကျနော်ကြိုး စားပြီး၊ သယ်ဆောင်ချင်ပါတယ်၊ ကျန်းမာသောအသင်းတော်၏ “လျိုဝှက်ချက်” လည်းဖြစ် အစဉ်တစိုက်၊ ရှာဖွေရမည့်အရာလည်း ဖြစ်သည်ဟု ကျနော်ယုံကြည်သော တိကျသည့်ကဏ္ဍသုံးမျိုးရှိပါ၏။
ကျန်းမာသောအသင်းတော်သည် မိမိနှလုံးသားထဲ၌ ယေရှုကို ချစ်မြတ်နိုးပါလိမ့်မည်။
ကျန်းမာသောအသင်းတော်သည် ယေရှုနှင့် သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် အပြည့်အဝ ဆက်ကပ်မှုရှိသော လူများဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်၏။
ကျန်းမာသောအသင်းတော်သည် ခရစ်တော်တစ်ဦး၏ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းကို အပြင်ဘက်လုပ်ဆောင် ခြင်းဖြင့် တွေ့မြင်ခြင်းရှိသောနေရာ ဖြစ်၏။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အနည်းငယ်မျှဖတ်ရှုရုံဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်သည် မိမိအသင်းတော်၏ တည် ထောင်သူနှင့် ဗသုကာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိမှတ်နိုင်ပါ၏။ သည့်အပြင်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူသည် အသင်းတော်ကို ဦးဆောင်ပေးနေသူဖြစ်ကြောင်းနှင့်၊ လိုအပ်သည့်တန်ခိုးနှင့် အာဏာစက်များကို လိုသလို အသင်းတော်အား၊ ထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်သည့်အချက်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့သိမှတ်သင့်ပါ၏။
ခရစ်တော်သည် အသင်းတော်၏ ဦးခေါင်းဟုပြောဆိုရာတွင်၊ အကန့်နှစ်ခုရှိကြောင်း၊ ထိုအထဲတွင် သူသည် ဦး ခေါင်းဖြစ်ရသောအသင်းတော်၏ “အဖွဲ့အစည်း” နယ်ပယ်သာမက “စီမံခန့်ခွဲရေး” ကဏ္ဍတွင်လည်း ဦးခေါင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သိမှတ်ထားသင့်ပါ၏။
ယေရှုခရစ်တော်သည် မိမိအသင်းတော်ကို ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အဖြစ် မိမိရဲ့တန်ခိုးတော်နှင့် အာဏာစက် ဖြင့်သော်၎င်း၊ အုပ်စိုးဖို့နှင့် စိုးစံဖို့ရန် မိမိရဲ့အစွမ်းသတ္တိနဲ့သော်၎င်း၊ ဤဘဝဤချိန်ခါ၌ ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင် စေြခင်းငှါ လွှမ်းခြုံပေးထားပါ၏။
အသင်းတော်စတင်ခါစအချိန်တွင်၊ တမန်တော်များသည် လူငယ်များကို ဦးဆောင်ဖို့နှင့်၊ လမ်းညွန်ပေးဖို့သော် ၎င်း၊ ဘုရားသခင့်လူစုများ၏နိုင်ငံတော်သည် အင်အားနှင့်ရင့်ကျက်မှုပိုင်းတွင်၊ ကြီးထွားလာစေခြင်းငှါသော် ၎င်း၊ “အထူးသောအာဏာစက်” ပေးအပ်ခြင်းခံရကြ၏။ ဒါပေမဲ့၊ သူတို့အပေါ်မှာသာ၊ တစ်ချိန်တစ်ခါပဲ ထိုသို့ ကျိန်းဝပ်သည်ဟု နားမလည်စေချင်ပါဘူး။
အတုအပကင်းသောပုံစံဖြင့် သူတို့တတွေသည် ဖွံ့ဖြိုးစပြုလာသောအသင်းတော်ကို ရင့်ကျက်ခြင်းသို့ သယ် ဆောင်လာပေးကြ၏။ သို့သော် ၎င်းသည် အမှုတော်မြတ်ကဏ္ဍတွင် “အထူးနှင့်တိုတောင်းသောရှင်သန်မှု” သာ ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အသင်းတော်စတင်ခဲ့ချိန်က တမန်တော်ဆယ့်နှစ်ပါး လုပ်ဆောင်သောအမှုတော်ကဏ္ဍ နှင့် တထပ်တည်းမကျသည့် လုပ်ဆောင်မှုများရှိသော ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ခံ၊ ထင်ရှားသော တမန်တော်များစွာ ရှိကြသေး၏။
သင့်အတွက် ပိုရှင်းအောင်အနည်းငယ်ရှင်းပြပါရစေ၊ အသင်းတော်၏ကနဦးကာလများတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အသင်းတော်အား တည်ထောင်ခြင်းရှိစေမည့် ခံယူချက်ဝါဒ (doctrine) ၏ “အောက်ခြေ ကျောက်တုံး” တစ်ခုကို တမန်တော်တို့သည် ပံ့ပိုးနိုင်မည်အကြောင်း၊ တမန်တော်တို့အား ပေးအပ်ထားခြင်းရှိ လေ၏။ ယင်းအချိန်ကတည်းကအစသော်၎င်း၊ နောင်ကာလ၌သော်၎င်း၊ အခြေခံကျောက်တုံးဟုခေါ်တွင်ရမည့် တမန်တော်သည် ထိုကာလမှစ၍ နောက်ဘယ်သောအခါမှ မပေါ်မပေါက်ရပေ။
“ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏သော့များ” ကဏ္ဍတွင်လည်း ဤသီးခြားတိကျသော တန်ခိုးနှင့်အာဏာစက်သည် ရှင်ပေတရုအပိုင်ဖြစ်ကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောထားခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း၊ သာမန်အားဖြင့် ဘယ်သောအခါမှ လက်ခံခြင်း မရှိကြသည့်လူများထံ ဧဝံဂေလိတံခါးဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ အချိန်အခါသမယများ၌သာ အသုံးပြုခြင်းရှိလေ၏။
ဤအရာသည် ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်တစ်ခုလုံးက ၎င်းအပေါ်အပ်နှင်းသော တန်ခိုးရှိရခြင်းအ ကြောင်းဖြစ်ပေ၏။ သို့သော် ၎င်းအား ကျမ်းစာမှန်ကန်ချက်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့သိမှတ်ကြသည်နှင့် တချိန်တည်း မှာပင် ဘုရားသခင်သည် မိမိအသင်းတော်၌ အစီအစဉ်များချမှတ်ထားကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့သိမှတ်ထား ရပါမည်။
“၁ကော ၁၄:၃၃” တွင် ပြောထားသည်မှာ “ဘုရားသခင်သည် ရုန်းရင်းခတ်သောအမှုကို ပြုစုတော်မမူ၊ သန့်ရှင်း သူတို့၏အသင်းတော်အပေါင်းတို့၌ ဖြစ်သကဲ့သို့၊ အသင့်အတင့်ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကို ပြုစုတော်မူ၏၊” ဟူ၍လာသဖြင့် အစီအစဉ်ချထားခြင်း နည်းလမ်းအားဖြင့် အသင်းတော်သည် ဘုရားသခင်ပေးထားသော တန်ခိုးနှင့်အာဏာ စက်တို့ဖြင့် အုပ်စိုးခြင်းရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အား၊ ယေရှုခရစ်တော်အသင်းတော်၏ ရှေ့နောက် ဆက်စပ်အကြောင်း၌၊ ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် မြင်တွေ့ရခြင်းရှိ၏၊ ၎င်းတို့မှာ ဝိညာဉ်ရေးရာ နှင့် အသင်းတော်ဘုန်း တော်ကြီးဆိုင်ရာ တို့ဖြစ်၏။
ဝိညာဉ်ရေးရာအပိုင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပေးသနားခြင်းဖြစ်၍ “တမန်တော်ဝတ္ထု ၂၀:၂၈” ယေရှုနာမတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးအားဖြင့်သာလျှင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ၏၊ “ယောဟန် ၂၀:၂၂−၂၃” နှင့် “၁ကော ၅:၄” ၎င်းသည် ယေရှုကို ယုံကြည်သူများ အထူးသဖြင့် အသုံးချနိုင်ပေ၏။ − “၁ကော ၅:၁၂” ပြီးတော့ ၎င်းကို ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာပုံစံ၌သာ မြင်တွေ့ခြင်းရှိနိုင်၏။ − “၂ကော ၁၀:၄”
နိုင်ငံသည် အပြင်ပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်ယာယီလူသားများ နေထိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ်၊ ဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးခြင်းကို ကိုယ်စားပြုထား၏ အသင်းတော်သည် အတွင်းပိုင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာနိုင်ငံထဲရှိ ဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးခြင်းကို ကိုယ်စားပြုထားပါ၏၊ အရင်နိုင်ငံက ၎င်းတို့၏အပြင်ပိုင်းနှင့် ပြည်သူ့အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်ရေးနှင့် ပျော်မွေ့ ရေးကို မျှော်မှန်းထားပြီး၊ အချိန်တိုင်းမှာ အာဏာကိုနိုင်ထက်စီးနင်းပြုလုပ်ဖို့ အသုံးချတတ်ကြသော်လည်း၊ ယေရှု၏အသင်းတော်သည် ၎င်း၏ “ဆိုးသွမ်းသောစိတ်ဓာတ်”နှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်းအပေါ် ထူထောင်ထားခြင်းရှိ ကာ၊ ဝိညာဉ်ရေးရာချည်နှောင်ခံခြင်းမှ လူသားများကို သမ္မာတရားအား သိကျွမ်းခြင်းများ ပေးကမ်းခြင်းအား ဖြင့်၊ လူသားများကို ကယ်တင်သောလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေ၏။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့် အသင်းတော်၏တန်ခိုးသည် ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် အတင်းအဓ္ဓမစေခိုင်းကြခြင်းမျိုး ပြသခြင်းရှိသည့် တိုင်းနိုင်ငံမျိုးမဟုတ်၊ သို့သော်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာနိုင်ငံတော်ဖြစ်၏။
ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်၌ မိမိအသင်းတော်တွင် အာဏာစက်နေရာများကို လူသားများအား တည်ဆောက် ထားပြီးဖြစ်ကာ၊ ၎င်းသည် အသင်းတော်ဘုန်းတော်ကြီးရာထူးဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ယေရှုခရစ်တော်လက် အောက်၌ အပြင်ဘက်နှင့်အတွင်းဘက်နှစ်မျိုးစလုံးမှ အခေါ်ခံရခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော်ကို အုပ်စိုးရ၏၊ သို့ ဖြစ်၍ ဤအရာက စကြဝဠာဆိုင်ရာ၊ အသင်းတော်၏ အမှုတော်ဆုကျေးဇူးများကို ပြည့်စုံစေ “ဧဖက်ဩဝါဒစာ ၄” ပြီး၊ ဒေသန္တရအသင်းတော်၏ သင်းအုပ်များနှင့် သင်းထောက်များ၏ ရာထူးများကိုလည်း ပြည့်စုံရာရောက် လာလေ၏။
ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုစလုံးတွင် တန်ခိုးကို ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ညွန်ကြား ချက်နှင့်အညီ အသုံးချြခင်းရှိကာ၊ ထာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မိန့်မှာချက်များ “မဿဲ ၂၈:၁၉”၊ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်၌ ခွင့်ပြုထားသောအရာများနှင့် တားမြစ်ထားသောအရာများကို စူးစမ်းခြင်း “မဿဲ ၁၆:၁၉”၊ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် အပြစ်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း “ယောဟန်၂၀:၂၁”နှင့် အသင်းတော်တစ် ခုလုံးကိုခြုံ၍ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကျင့်သုံးခြင်းတို့ကို ခြုံငုံထားကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်နိုင် ပါသည်။
ပြောခဲ့ပြီးသော အသင်းတော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနယ်ပယ်ထဲ၌၊ အောက်ပါအကြောင်းအရာကို ပို၍နီးကပ် အောင်၊ စူးစမ်းနိုင်ရေးသို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအသက်တာထဲ၊ သန့်ရှင်းသောအသက်တာနှင့် သန့်ရှင်းသောပြုမူကျင့်ကြံမှုများ၊ ယူဆောင်ပေးရေးသည် သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ အစဉ်အမြဲကြိုးစားလုပ်ဆောင်သောအရာဖြစ်၏။ ၎င်း သည် လူသားအပေါ်သော်၎င်း၊ လောကအမြင်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားအပေါ်တွင်သော်၎င်း၊ အခြေပြုထားခြင်းမ ဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာ အခြေပြု ထားခြင်းရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျမ်းစာချိန်သီးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိသော တိုင်းတာမှုရှိတဲ့ အသက်တာမျိုးဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့သော်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီ၏အသက်တာ၌ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အ သက်တာထဲ၊ အသီးသီးခြင်းမျိုး ဘယ်တော့မှ မျှော်လင့်၍မရနိုင်ရာ။
ဘုရားသခင်၏အလိုတော်မှာ “ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကိုချစ်လျှင်၊ သူ့ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ထိန်းရလိမ့်မည်၊” သို့ သော်ငြားလည်း ယိုင်းယိမ်မှုမှာ ယနေ့ခေတ် ကျွန်ုပ်တို့ရှင်သန်နေရသော ခေတ်သစ်ထဲ ယေရှု၏အသင်းတော် တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ သတိထားအသက်ရှင်ခြင်း မရှိကြဘဲ “ကျွန်ုပ်တို့အမြင်၌၊ မှန်တယ်ထင်တာဟူသမျှကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်တတ်ကြခြင်းဖြစ်၏၊” –“သုတ္တံ ၂၁:၂” မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဤသို့ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နည်း လမ်းမဟုတ်ပေ။
နေရာဒေသများစွာရှိ၊ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်၌ စည်းမျဉ်းဉပဒေများမရှိတာ သတိပြုစရာဖြစ်၏ အပြစ် သားကို ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်းသည် ယေရှု၏စေခိုင်းချက်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိမှတ်ပြီး ဘုရား ကျောင်းသို့၊ ထိုသူတို့အား၊ ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားနေကြသော်လည်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ ကျွန်ုပ် တို့သည် ပထမဦးဆုံးသော သန့်ရှင်းသူများ လူစုဖြစ်ကြောင်းနှင့် တမင်တကာသော်၎င်း၊ ဖီဆန်သောသဘော ဖြင့်သော်၎င်း၊ အပြစ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့်၊ သည်းခံနိုင်ခြင်းမရှိ ကြောင်းလည်း၊ သတိပြုရပါမည်။
အသင်းတော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည် ကျမ်းချက်များစွာနှင့်သက်ဆိုင်နေပြီး၊ ထိုအကြောင်းကြောင့်ပင်၊ ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရေး၊ အရေးကြီးခြင်းဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသိပညာ ထပ် လောင်းတိုးပွားခြင်းအား၊ ပံ့ပိုးပေးမည့် ထပ်လောင်းလေ့လာခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကိုးကားချက်များမှာ− “၁ကော ၅:၂−၇” – “၂ကော ၂:၅−၇” – “၂သက်၊ ၃:၁၄−၁၅” − ၁ တိ ၁:၂၀” တို့ဖြစ်ပြီး ဤကျမ်းချက်အသီးသီးထဲ တွင်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုအပ်သည့် အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များရှိ၏။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍနှစ်ရပ်ရှိ၏၊ တစ်ခုမှာ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် တစ်ဦးဆိုင် ဆုံးမခြင်း၏အစပြုခြင်းဖြစ်၏၊ ၎င်းအကြောင်ကို ဖော်ပြထားသည်မှာ “မဿဲ ၁၈:၁၅−၁၇” ဖြစ်၏။ အကယ်၍ ညီအစ်ကိုတစ်ဦး(သို့) ညီအစ်မတစ်ယောက်က သင့်အားပြစ်မှားခဲ့သော်၊ သူတို့အား ဆိုဆုံးမခြင်းရှိရမည်။ သို့ ဖြစ်၍ ၎င်းသည် ထိရောက်မှုမရှိလျှင်၊ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များက ဤအမှုကို ကိုင်တွယ်ရလိမ့်မည်၊ အသင်းတော်သို့ အသိပေးကာ၊ ထိုကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ရပါမည်၊ သို့သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အများအပြစ်မဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆိုင်အပြစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ သိမှတ်ထားရပါမည်။ ၎င်းသည် အများဆိုင်အပြစ်အဖြစ်၊ အကျုံး ဝင်သောအခါတွင်၊ ၎င်းပြစ်မှုများကို အခြားသောနည်းဟန်ဖြင့်၊ ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်။
“၁ကော ၅:၁” တွင်၊ ရှင်ပေါလုက အများဆိုင် အပြစ်တွေ့မြင်ရခြင်းရှိပြီး၊ ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသောကြောင့် အသင်း တော်ကို ဆုံးမထားပါ၏။ “ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂:၁၄−၁၅−၂၀” မှားယွင်းသည့်သွန်သင်မှုပေးသော ဆရာများကို သူတို့ အလယ်မှမဖယ်ရှားကြသောကြောင့်၊ ပေရဂံမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်နှင့် သွာတိရမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်တို့ အား၊ ဆုံးမထား၏။
အများဆိုင်အပြစ်များသည် ဖြေရှင်းခြင်းရှိရပါမည်၊ သို့မဟုတ်လျှင် ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်သည် အပြစ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ အစဦး၌ပင် ကျမ်းစာက ဖော်ပြသော ပွဲတော်သုံးဆောင်ခြင်းမှ၊ နောင်တမရတဲ့ အ ပြစ်ကျူးလွန်သောသူ တစ်ဦးစီတို့အား၊ ပိတ်ပင်တားမြစ်ရမည်မှာ၊ ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းသည် တစ်ဦးတစ် ယောက်ဆိုင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးတစ်ရပ်ဖြစ်ပေ၏၊ အကယ်၍ ဤအချက်က ထိုသူတို့အား နောင်တတ ရားသို့ ခေါ်ဆောင်မသွားနိုင်သေးသော်၊ အသင်းတော်မှ ထုတ်ပယ်ပြုရပါမည်၊ “မဿဲ၁၈:၁၇” – “၁ကော ၅:၁၃” – “ တိတု ၃:၁၀−၁၁” ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင့်လူစုထဲ၌ သန့်ရှင်းမှုထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသော၊ ညီအစ်ကို (သို့) ညီအစ်မတစ်ဦးဦးတို့အား မိဿဟာယထဲ၊ ပြန်ခေါ်ဆောင်လာရမည်အကြောင်း သတိသင့်ပါ၏၊ “ ၁ကော ၅:၅”။
ယေရှုခရစ်တော်ဤလောကသို့ ကြွလာစဉ်ခါတွင်၊ ကိုယ်တော်ရဲ့သာသနာပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ သမ္မာကျမ်းစာ က၊ ကျွန်ုပ်တို့အား၊ ရှင်းလင်းစွာ ပြောပြထားပြီး၊ ၎င်းအကြောင်းကို ဖော်ပြထာသည့် ကျမ်းချက်များအနက်၊ တစ်ခုမှာ− “၂ကော ၅:၁၉” ဖြစ်၏။ − “ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်ထဲ၌ရှိနေလျက်၊ လောကီသားတို့၏အပြစ် များကို မှတ်တော်မမူ၊ ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့စေတော်မူ၏”။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယနေ့ဤနေရာ ဤဒေသ၌ ငါတို့သည် ယေရှုသာသနာပြုခြင်း၏ ပြည့်စုံခြင်းအရာ၌၊ သက်သေများဖြစ်ကြ၏။
ယေရှု၏လုပ်ဆောင်ချက်တာဝန်မှာ ကာရာနီတောင်ကုန်းပေါ်က လက်ဝါးကားတိုင်အပေါ် မိမိရဲ့အစေခံခြင်း အားဖြင့်၊ တန်ခိုးကြီးသောထာဝရဘုရားနှင့်အတူ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ခြင်းကို ယူဆောင်လာနိုင်ဖို့ဖြစ်၏။ ၎င်းအကြောင်းကို “ကောလောသဲ ၁:၂၁−၂၂” ထဲတွင် ….. “ အထက်က ဘုရားသခင်နှင့်ကွာရှင်း၍၊ ဆိုးညစ် သောအကျင့်ကို ကျင့်သဖြင့်၊ စိတ်နှလုံး၌ရန်သူဖြစ်သော သင်တို့ကို၊ ကိုယ်ခန္ဓာတော်၌၊ အသေခံတော်မူသော အားဖြင့်၊ ယခုမိဿဟာယဖွဲစေတော်မူ၏…… ဧဝံဂေလိတရား၏မျှော်လင့်ခြင်းမှ မလျော့ဘဲ တိုက်မြစ်ကျခြင်း၊ တည်ကြည်ခြင်းနှင့်တကွ၊ မြဲမြံစွာယုံကြည်လျှင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်လျက်၊ အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ် လျက်ရှိသော သင်တို့ကို၊ ရှေ့တော်၌ ဆက်သမည်အကြောင်းတည်း၊” ဟူ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့နောက်၊ ဤ ဆက်သခြင်းတရားအပေါ် အခြေပြု၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာထဲ၌ ဘုရားသခင် ၏အလိုတော်ကို အစဉ်မပြတ်လုပ်ဆောင်ပေးနေပါ၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးဖွင့်ဟချက်နှင့် ထိုသခင်ဆီသို့ တုန့်ပြန်ချင်စိတ်ရှိခြင်းအားဖြင့်၊ ခရစ်တော်၏လုပ်ငန်းသည် အောင်မြင်မှုရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ခမည်းတော်ဘုရားအား ကျေနပ်စေကာ၊ ဤဘဝနှင့်နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာ မည့်ဘဝထဲ၌၊ ကြွယ်ဝခြင်း၊ စုံလင်ခြင်းနှင့်ပြည့်ဝခြင်းရှိပါလိမ့်မည်။
ကနဉီးအသင်းတော်သည် ဤသင်ခန်းစာကို သင်ယူထားသည့်အတွက်အကြောင့် ဤသက်သေခံတော်မူချက်ကို သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူတို့ခေတ်ကမ္ဘာကို “မှောက်လှန်ပြစ်ရသည်အထိ” – “တမန် ၁၇:၆” ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ခဲ့ကြ ၏၊ သည့်ပြင် သူတို့နှင့် ပတ်သက်၍သေချာစွာ မှတ်သားစရာတစ်ခုရှိပြီး၊ ၎င်းမှာ တစ်စည်းတစ်လုံးတည်း ထော ပနာပြုကြသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်၏ “သူတို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြသည်ကို ကြည့်ပါ။”
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည့်ကမ္ဘာကြီးနှင့် အလွန်ပင်တူညီသော လူမဆန်မှု၊ လူသတ် မှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အကတိလိုက်စားမှု၊ လာတ်ပေးလာတ်ယူမှုနှင့် လိင်ဆက်ဆံမှု များပြား၍ ကလေးပျက်ချခြင်းမျိုးနှင့် ပြည့်နှက်သောကမ္ဘာထဲတွင် ဤခရစ်ယာန်များသည် အမှောင်နေရာထဲက အလင်းတစ်ခုပမာ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း စုစည်းရပ်တည်ခဲ့ကြ၏။ “အလားတူစွာ ကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောဆိုထားသည်မှာ − ထိုနည်းတူ သူတစ်ပါးသည် သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိ တော်မူသော သင်တို့အဘ၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ၊ သူတစ်ပါးရှေ့၌ သင်တို့အလင်းကို လင်းစေကြ လော့၊ “မဿဲ ၅:၁၆။
အစောပိုင်းက ဟေဗြဲဩဝါဒစာထဲရှိ အတူတကွစုဝေးခြင်းကို မစွန့်ပယ်ကြဖို့နှင့်ပတ်သက်၍ မိန့်မှာချက်အ ကြောင်းကို၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ (အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင် ပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်)၌ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ရှိတော်မူခြင်းနှင့် အထူးသဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၍ ထပ်လောင်း ကြည့်ရှုမှုကို၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်သွားပါမည်။
ကျေးဇူးတော်၏နည်းစနစ်ဟူသော် ဝေါဟာရသည် နည်းပညာအရ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ၊ဆိုရင် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ပါဝင်ဆင်နွဲမှုရှိသည့် ပြဋ္ဌာန်းသောစည်းမျဉ်းများ(ordinances) နှင့် အခမ်းအနား(ceremonies) အမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်၍ ယင်းတို့အားဖြင့် သူတို့သည် ကတိထားသော ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို လက်ခံ ရရှိခြင်းရှိကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ရှင်သန်နေထိုင်သော ဤခေတ်လူ့ဘောင်အသင်းအဖွဲ့တွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်စီအားဖြင့်သော်၎င်း၊ အစုအဖွဲ့အားဖြင့်သော်၎င်း၊ ဘုရားသခင် ချခင်းပေးထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း ရှေ့ဆက်ခရီးစဉ်၌၊ သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်၊ ခွန်အားများရရှိသည့် ယခုကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သော ကဏ္ဍများကို မေ့ လျော့ဖို့ လွယ်ကူလွန်းလှပါ၏။
ယနေ့ခရစ်ယောန်အသင်းတော်အများစုက ဆုတောင်းခြင်းသည် ဒုက္ခရောက်ခြင်းနှင့် ဖိစီးမှု ခံစားနေရာမှ၊ ကယ်နှုတ်ခြင်းနည်းစနစ်၏ ဝေါဟာရအဖြစ်၎င်း၊ ပေါ်ထွက်လာသော ဘေး ပတ်ဝန်းကျင်အား၊ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်းနည်းလမ်းအဖြစ်၎င်း၊ နားလည်သဘောပေါက်ထားကြ၏။ ဒါပေမဲ့၊ ဤပုံစံဖြင့် ၎င်းအား၊ မြင်ကြည့်ရုံမျှသည် တကယ်တော့ ဆုတောင်းခြင်းကို လျော့တွက်ထားခြင်းပင်ဖြစ်ပေ သည်။
ဆုတောင်းခြင်းသည် “ကျေးဇူးတော်၏နည်းစနစ်” ကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အထွတ်အထိပ်ထားခြင်းမှာ၊ အကြီး မြတ်ဆုံးသော နည်းစနစ်ဖြစ်၏။ ထိုအခွင့်အရေးကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားခြင်းရှိ၏။ ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် သခင်ယေရှုကို သိကျွမ်း၍ ခမည်းတော်နှင့်ဆက်ဆံနိုင်မည်အကြောင်းတည်း၊ ဤအခြေခံကျသော အရာ တစ်ခုသာ၊ ဝင်ရောက်မှုမရှိသော်၊ အခြားသောကျေးဇူးတော်၏ နည်းစနစ်ဟူသမျှတို့သည် မပြည့်စုံဖြစ်ကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ ထိရောက်မှုမရှိသောအရာများသာ ပံ့ပိုးပေးပါလိမ့်မည်။
ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဝိညာဉ်အကြား၊ အခြေခံအားဖြင့် လွတ်လပ်သောဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် သူ့အား၊ စကားပြောဆိုဖို့ အချိန်အသုံးပြုခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်၏သားသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့၊ ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက်ရာ၌ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသောအခြေခံကျသည့် ပြုမူပုံဖြစ်ကာ၊ ထိုအရာက ဘုရားအလိုတော်နှင့်အညီ၊ လုပ်ဆောင်ဖို့နှင့် လျောက်လှမ်းဖို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား၊ ဖြစ်မြောက် စေတော်မူ၏။
မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆန္ဒဖြင့် ကြီးစိုးခြင်းရှိတဲ့အချိန်မှာ ကောင်းမွန်စွာ ဆုတောင်းသည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ခရစ် ယာန်ပါဟု ကြွေးကြော်တာဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပေ။ −…… “သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်အတိုင်း မဖြစ် ပါစေနှင့်၊ ကိုယ်တော်အလိုတော်ရှိသည်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသော်” (လုကာ၊ ၂၂:၄၂) ဟု ဆုတောင်းသောသူသည် ယေရှုပင်ဖြစ်၏၊ ပြီးတော့လည်း ခမည်းတော်နှင့်အတူရှိ၍ ဆုတောင်းခြင်း၌ အချိန်များစွာ အသုံးပြုထား ကြောင်း ပြသပေးသူဟာလည်း ယေရှုပင်ဖြစ်ပါ၏။
ယေရှုအပေါ် ဘုရားသခင်၏အမြင်ကို သိမှတ်၍ သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့အပိုင်ဖြစ်လာရခြင်းသည် ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ အင်္ဂါရပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်၏။
ဆက်လက်ပြီး ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းရှိကြ၏။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်မှုမရှိရင် ၎င်းသည် ဒေသန္တရအသင်းတော်၏ “အပယ်ခံ” အမှုတော်မြတ်အဖြစ် အမြဲရှိနေပါလိမ့်မည်။
ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်သည် ထိရောက်မှုရှိပြီး၊ ရန်သူများအား ၎င်းတို့ခြေကုပ်ယူရာနေရာ၌ပင် အလဲ ထိုးဖို့ဆိုရင် စုပေါင်းအတူတကွ ဆုတောင်းခြင်းရှိ မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ပါဝင်ကြသော ခရစ်ယာန်များနှင့် သူတို့၏ တောက်လျှောက်ဆုတောင်းအားထုတ်ခြင်း အချိန်များစွာ၌၊ အာဏာစက်များနှင့် မှောင်မိုက်တန်ခိုးများကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့သည် အပြတ်သတ်လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေ၏။
ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအခံစားရဆုံးသူများ ဘုရားသခင်၏ထောက်ပံ့ခြင်းကို သိသောသူများ သခင် ဘုရားနှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းသောသူများနှင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာထဲ၌ ပြဿနာအနည်းကျဉ်းသာ ခံစားရ သူများသည် ဘုရားသခင်၏လူစုများနှင့် အတူတကွ ပုံမှန်ဆုတောင်းသောသူများဖြစ်၍ သူတို့တစ်ဦးတစ် ယောက်တည်းဖြင့်လည်း၊ အမြဲဆုတောင်းကြသူများဖြစ်သည်ဟူ၍ အသင်းတော်အားလုံးရဲ့ မကြာခဏ မြင်တွေ့ တတ်သည့် ဘုံရှုထောင့်တစ်ခု ဖြစ်၏။
“ခုနစ်ရက်ဆုတောင်းခြင်းက တစ်ပတ်ဖြစ်စေ၏” ဟူသော ပြောစကားရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် အမှန်ပင်ဖြစ်၏။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ဖက်ဖြစ်ကြသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက် နေ့စဉ် သခင်ဘုရား ရှေ့မှောက်၌ အချိန်ယူကာ ဆုတောင်းပေးကြပါသလားဆိုတာသည် မိမိကိုယ်ကိုမေးရမည့် မေးခွန်းဖြစ်၏၊ တစ် ပါးသူများအား၊ ကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပေးခြင်းအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ် စေသည်ဖြစ်၍၊ ဆုတောင်းပေးဖို့၊ ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် တစ်ပါးသူများကို၊ ဆင်းရဲစေခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ် ကို ဆင်းရဲခြင်းသို့ ပို့ဆောင်ရာရောက်ပေ၏။
ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ စုံလင် သော ဗျာဒိတ်တော်ကို ပံ့ပိုးပေး၍ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် အစဉ်အမြဲပင် ဘုရားရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာကိုသာ၍ ဖွင့်ပြပေးခြင်းတို့ကို ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ သိမှတ်နိုင်ခြင်း သည် ကျွန်ုပ်အံ့ဩမိပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာနှင့် အကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာ ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း နှစ်ခုလုံးပေါင်း ၆၆ အုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ဖွင့်ပြချက် အလုံးစုံနှင့် ဘုရားအလိုတော်ရယ် သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များ ပေးထားခြင်း ဖြစ်၍ သမ္မာကျမ်းစာအပေါ်မှာသာ အခြေပြုခြင်းမရှိသော်၊ အခြားသောစာအုပ်(သို့) ဗျာဒိတ်တော်မရှိတော့ပေ။ သို့ဖြစ်ပါ၍၊ ယင်းအပေါ၌သာ ခရစ်ယာန်များသည် မိမိတို့အသက်တာများ အခြေခံထားသင့်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် စိတ်သဘောထားများ တိုင်းတာချက်ကို ဆန့်ကျင်သော “ချိန်သီး” ဖြစ်သဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် သာ၍တူသောအသက်တာ၌ ကြီးထွားဖို့ဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ ၌၊ သူ့ရဲ့တန်ခိုးတော်နှင့် ဘုရားအာဏာစက်တို့ကို ကျနော်တို့ သိရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်သဘောထားများ ၌၊ သူ့အား အတုယူမှုရှိခြင်းကို မြင်တွေ့ရပါမည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုဖို့နှင့် လေ့လာဖို့သည် အမိန့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းထဲသို့ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီဖြင့်သော်၎င်း၊ အတူတကွ ဖြင့်သော်၎င်း၊ ဝင်ရောက်လာခြင်းရှိ၏။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုဖို့ ပျက်ကွက်လို့ နောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်းရှိသော ခရစ်ယာန်များစွာရှိ၏၊ အသက်တာသည် ဦးနှောက်စားလာ၍၊ ရှုပ်ထွေးမှုရှိကာ၊ ရှုံးနိမ့်သောဘဝသို့ရောက်ရှိသည့် ခရစ်ယာန်များစွာ လည်းရှိကြ၏။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းစွာပြောရရင်၊ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုကြ သော်လည်း၊ လိုက်နာဖို့ငြင်းဆန်ကြသောကြောင့်၊ ဖြစ်၏။
အစောပိုင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယေရှုသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် တောသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရ၍၊ ထိုအရာတွင် စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းခံရကြောင်းကို သင် မှတ်မိနေမည်အကြောင်း၊ သံသယစိတ်မရှိပါဘူး။ သူသည် ခမည်းတော်နှင့်ပေါင်းသင်းနေသကဲ့သို့ ရန်သူကြီး ထွက်ပြေးရခြင်းအကြောင်းသည် ကျမ်းစာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြစ်၏။ ဤအချက်သည် ဘုရားသခင်၏သားသ မီးများ အသက်တာ၌လည်း ခြားနားမှုမရှိပေ။ ရန်သူကို ဆန့်ကျင်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုတောင်းခြင်း၌ ဘုရား နှုတ်ကပတ်တော်ကို သုံးကြသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်နက်၌ ထိုဆုတောင်းခြင်းထက် ပို၍ တန်ခိုးအစွမ်း ထက်သောအရာမရှိတော့ပေ။
ဤတထပ်တည်းအကျိုးဆက်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်၏ အမှုတော်မြတ်ကိုလည်း ဖော်ပြရ မည်၊ ‘တရားဟောခြင်းသည် ထူးခြားသော ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ဖြင့် သမ္မာတရားကို ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်၏၊” ဟု ဆိုစ ကားရှိခဲ့ရာ ၎င်းသည် မှန်လည်းမှန်ပါ၏။ ပြီးတော့ ထိုအရာသည် အမှန်ပင် အစွန်းထင်ကျန်လေ၏။
မည်သည့်ပုံစံမဆိုဖြင့် တရားဟောခြင်း ပုံမှန်ရှိသောသူများသည် နှုတ်ကပတ်တော်၏မှန်ကန်သော သဘော ထားကို ပြောဆိုဖွင့်ပြခြင်းရှိရေးနှင့် ရှင်းလင်းမြင်သာမှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အခြေအနေများအတွက် သင့် လျော်သည့်သမ္မာတရားကို ဖွင့်ပြခြင်းရှိရေးအတွက် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများထဲ နှစ်မြှုပ်ခြင်းရှိရ မည်။
ဤကဏ္ဍ၌၊ အသင်းတော်အား၊ မိမိတောင်းဆိုသော အကြောင်းတရားများ ကြားနာ၍ လုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ သူတို့၏ထူးခြားသော၊ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်၊ အသင်းတော်သည် ပုံမှန်တရားဟောသော အမှုတော်ဆောင်များအတွက်၊ ဆုတောင်းပေးဖို့ သည် အရေးကြီးသည်။
အချိန်တိုင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့အား၊ ဘုရားသခင်ပေးသ နားတော်မူသောအရာများကို သိမှတ်လျက်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ ဘုရားသခင်သည် မည်သူတွေအတွက် ဖြစ်ကြောင်းကို သိမှတ်ရင်းကျေးဇူးသိတတ်သူများ ဖြစ်သင့် ပါ၏။
ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအကြား အခြေခံကွာခြားချက်ရှိပါ၏။ ချီးမွမ်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်ပြုပြီး ထားသောအရာများအတွက် ဘုရားသခင်ကို ဗဟိုပြု၍ ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်ရာ၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှာမူ၊ ဘုရားသခင်သည် မည်သူဖြစ်ကြောင်းအပေါ် ဗဟိုပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍၊ ဤနှစ်ရပ်သည် မကြာခဏပင် ရောယှက်ခြင်းရှိတတ်ကြ၏။ အချိန်များစွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို ဤကဏ္ဍနှစ်ခုထဲက တစ်ခုအတွင်း သို့ ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ကြသင့်ပါသည်။
ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအလယ်၌၊ ဘုရားသခင်သည် ချီးမွမ်းခြင်းအား လက်ခံရရှိခြင်း၌ သူသည် ဘုရားဖြစ်ခြင်းကို ဂုဏ်ပြုခြင်းရှိရမည့်အစား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုတောင်းခြင်းထဲသို့ ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သည် လွယ်လွယ်လေးဖြင့်၊ ပြုလုပ်တတ်ကြပါ၏။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် “ဈေးဝယ်စာရင်းလိုအပ် မှုများကို” ထာဝရဘုရားထံ စတင်ယူဆောင်လာတာနှင့် တူပေ၏။
လက်တွေ့အကြောင်းတရား၌၊ ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွ စုဝေးလာရခြင်းဖြစ်သော ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ပတ် သက်၍လည်း ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ လိုအပ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတူတကွစုဝေးခြင်းအရာ၌၊ ကျွန်ုပ် တို့၏လိုအပ်မှုများ ဖြည့်ဆည်းခြင်းရှိကြောင်းကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းကြီးပေး ကြောင်းကို၎င်း၊ သိမှတ်ကြဖို့သည် အရေးကြီးလှပေသည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ထဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့အတူ တကွစုဝေးလာကြသောအခါ၊ အခြေခံသဘောတရားအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ခံရရှိဖို့မဟုတ်ဘဲ၊ ပေး ကမ်းဖို့သက်သက်ဖြစ်ကြောင်း လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်၏။ “ကိုယ်တော်အား ကျေနပ်အားရစေဖို့နှင့် ပျော်မွေ့စေ ဖို့ အကျွန်ုပ်အား၊ ယခုမစတော်မူပါဟူသောအချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ပြခြင်းရှိသင့်သော မှန်ကန်သည့်စိတ် သဘောထားဖြစ်၏။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိ၊ အချိန်နောက်ကျ၍ ကောင်းသောအရာ ခံစားရဖို့စိတ်ဆန္ဒအတွက်၊ ဖြည့်ဆည်းမှုရှိဖို့သာ မျှော်လင့်ရင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ် ပေါ့ပါးမှုရှိရေးအတွက်သာ၊ ဘယ်လောက်များများသောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွ စုဝေးခြင်းရှိကြပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ရိုးသားမှုရှိသော်၊ ဤအရာများမဖြစ်သင့် ပေ။ − “၁ကော ၁၄:၂၆” တွင် “ညီအစ်ကိုတို့၊ အဘယ်သို့နည်း၊ သင်တို့စည်းဝေးကြသောအခါ၊ ဆာလံသီချင်းကို ရသောသူ၊ ဆုံးမဩဝါဒကိုရသောသူ အခြားသော ဘာသာစကားကိုရသောသူ၊ ဗျာဒိတ်တော်ကိုရသောသူ၊ အနက်ဘော်ပြရာကို ရသောသူ၊ အသီးသီးရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို တည်ဆောက်ခြင်းအလို့ငှါ၊ စီရင်ကြလော့၊” ဟု ဆိုထား၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၎င်းကျမ်းချက်က ကျွန်ုပ်တို့ရှိသင့်သည့် စိတ်သဘောထားအ ကြောင်းကို ပီပီပြင်ပြင် ဖော်ပြထားပါ၏။
ချိန်တိုင်းမှာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်၏ခေါင်းဆောင်သည် ၎င်းအတွက် အပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မမျှော်လင့်သင့်ပေ။ သူ(သို့)သူမ၏ပခုံးပေါ်တွင် များစွာသော တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှိလင့်ကစား၊ သူတို့ လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာဝတ္ထုများနှင့် ၎င်းအရာဝတ္ထုများနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများသည် ညီတူညီမျှ အရေးကြီးကြပါသည်။
ဤအချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ဘုရား၏ညစာသုံးဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုကြ၏ ၎င်းသည် တောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်၏ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်၌ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များသည် ပွဲတော်သုံးဆောင်ခြင်း၌ ပါဝင်ကြ၏။
ဘုရားသခင်၏သားသမီးတစ်ယောက်အား၊ ပွဲတော်သုံးဆောင်ခြင်း တားမြစ်ပိတ်ပင်ဖို့အရေးသည် ဧဝံဂေလိအ မှုတော်ဆောင်တစ်ဦးဦးရဲ့ နယ်ပယ်အတွင်းထဲမဟုတ်သလို အသင်းတော်တစ်ခုခု၌ မဟုတ်ပေ။ ဤကိစ္စကို ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းမှာ ပြောပြထားသလို အသင်းတော်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ သက်ဆိုင် သည်ဖြစ်သဖြင့်၊ တချိန်တည်းမှာပဲ ခရစ်ယာန်များသည် ပွဲတော်ကို မထီလေးစားမပြုသင့်ပါကြောင်း၊ သတိပြု ထားသင့်၏။
ယေရှုအသင်းတော်ထဲ၌ ပွဲတော်မသုံးဆောင်မီ သူတို့ကိုသူတို့ မှန်ကန်စွာ၊နှင့် ရိုးသားစွာစမ်းစစ်ခြင်း အရေးကြီး ကြောင်းကို သိမှတ်ဖို့ရန်၊ ပျက်ကွက်ကြသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ကာလရှည်ဖျားနာသူများနှင့် အချိန်မတန်သေးဘဲ အသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေ အမြောက်အများရှိကြ၏။ အာနနိနှင့် ရှာဖိရေတို့လင်မယားသည် အကောင်းဆုံးသာဓ ကများဖြစ်ကြ၏။
ပွဲတော်ကျင်းပချိန်သည် အသင်းတော်သည် သခင်ဘုရားရှေ့မှောက်၌၊ အသက်တာများမှန်ကန်မှုနှင့်အတူ ၎င်း၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံး အချိန်ကာလဖြစ်သင့်ပြီး၊ မုန်းတီးနေကြသော ညီအစ်ကိုများနှင့် ညီအစ်မများအား ပဲ့ ပင်ခြင်းရှိကာ၊ သိသမျှအပြစ်များ ဖြေလျော့ခြင်းရှိရမည့် အချိန်လည်းဖြစ်၏။ ထိုကဲ့သို့သောအချိန်သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် ကြွယ်ဝစွာ၊ စီးဆင်းရသောအချိန်ပေတည်း။
ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်သည် ပင်တေတုတ္တေနေ့တွင် အံ့ဩဖွယ်အစပြုမှုရှိခဲ့ပြီးဖြစ်၍၊ ယင်းအလားတူ ပုံစံဖြင့်၊ အသင်းတော်သည် အံ့ဩဖွယ်အဆုံးသတ်ခြင်းလည်း ရှိလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုရ သည်မှာ၊ − “ ၁သက် ၄:၁၆ −၁၇” ….. “ သခင်ဘုရားသည် ကြွေးကြော်ခြင်း၊ ကောင်းကင်တမန်အသံပေးခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏တံပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွ ကောင်းကင်ဘုံမှ ကိုယ်တော်ဆင်းသက်တော်မူ၍၊ ခရစ်တော်၌ သေလွန်သောသူတို့သည် အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်၊ ထိုအခါ အသက်ရှင်၍ ကျန်ကြွင်းသော ငါတို့သည် အာကာသကောင်းကင်၌ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့၊ ရောက်စေခြင်းငှါ၊ ထိုသူတို့နှင့်တကွ မိုးတိမ်ပေါ်သို့ ချီဆောင် ခြင်းကိုခံရသောအားဖြင့် သခင်ဘုရားနှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်။” ထိုအကြောင်းသည် လှပတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးလို ကျနော်တွေးမိပါတယ်။ သင်ရော မတွေးမိဘူးလား။
ဤအရာဖြစ်ပျက်အပြီးတွင် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ ခုနှစ်နှစ် ရောက်လာလိမ့်မည်၊ ခရစ်တော်အယောင်ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်(Antichrist) ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သိုးသငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကို ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်စွာ ဆင်နွဲကြမည်ဖြစ်ကာ၊ ယုဒလူမျိုးများသည် ပရောဖက်ဟောပြောချက်အတိုင်း “ယာကုပ်၏ဘေးဒုက္ခ” ကို ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၏ နောက်ဆုံးပိုင်း သုံးနှစ်ခွဲ အတောအတွင်းဝင်ရောက်ကြရလိမ့်မည်။
ခုနှစ်နှစ်ကာလပြီးဆုံးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့တတွေသည် ယေရှုနှင့်အတူ ပြန်လာ၍ နှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်း ထဲ ဝင်စားကြရမည်၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ နှစ် ၁,၀၀၀ ကာလကို စိုးစံခွင့် ရရှိကြပါမည်။
ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာကို ရှာဖွေကြဖို့အရေးနှင့် သိရှိကြဖို့အရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦး တစ်ယောက်စီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပေ၏။ ကိုယ်ကျရာနေရာ၌ သခင်ဘုရားကို သော်၎င်း သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို အစေခံပါ။
ဘုရားသခင်သည် မိတ်ဆွေအား၊ ကြွယ်ဝစွာ ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
Posted in Announcements, Studies